နောက်ဆုံးသော Bee Gees
Rahni - Bee Gees တွေက ရွှေဇွန်းကိုက်ပြီး မွေးခဲ့တဲ့အစားထဲမှာ ပါလား?
Barry - အဲ့လို အစားထဲတော့မပါ ပါဘူး...ဆင်းရဲတဲ့ အထဲမှာပါတယ်...ကျနော်တို့က မန်ချက်စတာမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပြီး အကြောက်အလန့်မရှိတဲ့ ကလေးတွေပါ...ကျနော်တို့မိဘတွေက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ Ten Pound Poms ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လ.၀.က ကြေး ဆယ်ပေါင်ပေးပြီး သြစတေးသျမှာ အခြေချနေထိုင်တဲ့ လူစုထဲမှာပါတယ်...သြစတေးသျမှာ ကြီးပျင်းခဲ့တာ ဘယ်အရာထဲမှ မတူပါဘူး....အဲ့ဒါကျနော့ နိုင်ငံပါ.....ကျနော့စိတ်ထဲမှာ အမြဲရှိနေပါတယ်....
Rahni- Bee Gees တွေ နာမည်ကြီးလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့လား?
Barry- အဲ့လို အောင်မြင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာဖို့ ကလွဲပြီး စိတ်ထဲမှာ ဘာမှမရှိဘူး...
Bee Gees တွေဟာ သူတို့ရဲ့ သီချင်းတစ်ချို့ သဩစတေးသျမှာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ပိုမိုအောင်မြင်စေရန် အင်္ဂလန်ကို ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြတယ် .....Beatles အဖွဲ့ရဲ့ မန်နေဂျာတွေ သူတို့ကို သတိထားမိတဲ့နောက်မှာ သီချင်းခွေထုတ်ဖို့ စီစဉ်ကြပါတော့တယ်....ပထမတော့ သူတို့ ဘယ်သူတွေပါဆိုတာကို အသိမပေးဘဲ ရေဒီယို အစီအစဉ်တွေကနေ ထုတ်လွင့်ခဲ့တယ်.....လူတွေက Beatles တွေ ဆိုနေတာလို့ပဲ ထင်ခဲ့ကြတာပါ.....
Rahni- မင်းတို့မိဘတွေကရော အခုလို သီချင်းဆိုတာကို အားပေးကြလား?
Barry- စင်ပေါ်မှာ ပြုံးနေဖို့ အဖေက အမြဲတမ်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ နောက်ကနေပြီး လက်အမူအရာနဲ့ သတိပေးနေကြလေ...ဒါပေမယ့် အဖေက လျို့၀ှက်တယ်...သူဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို အမြဲဖုံးကွယ်ထားတတ်တယ်....
(၁၉၆၉) မှာတော့ အဖွဲ့ကနေ Robin ထွက်သွားပြီး အဖွဲ့လှုပ်ရှားမူ့တွေ ရပ်တန့်သွားတယ် ....နောက်နှစ်နစ်အကြာမှာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းကြပြီး သူတို့ရဲ့ ကံကောင်းခြင်းတွေ ပြန်လည် ယူဆောင်လာပါတယ်....သူတို့ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ မီယာမီကို ပြောင်းသွားကြပြီးနောက်ပိုင်း Disco ‌ေလာကမှာ တစ်ရှိန်ထိုး အောင်မြင်သွားပါတယ်....
Rahni- သွားလေရာမှာ လူထောင်ပေါင်းများစွာ က လက်ခုပ်တီးကြိုဆိုနေကြတာဆိုတော့ ဘယ်လိုခံစားရလဲ?
Barry- ကောင်းတာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား?
Rahni- သိဘူးလေ အဲ့လိုမှ မအောင်မြင်ဖူးတာ... သီချင်းရေးတဲ့အခါ ဘယ်လိုရေးခဲ့ကြလဲ?
Barry- ပထမဆုံး သံစဉ်ကို အရင်ရှာကြတယ်...နောက်သုံးလေးရက်နေမှ သူနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် စာသားတွေ စဉ်းစားကြတာပေါ့...သံစဉ်ကို ခေါင်းထဲအမြဲကြားနေအောင်လုပ်ပြီးမှ စာသားထည့်ခဲ့ကြတာ....
Rahni- မင်းရဲ့ အသံအမျိုးအစားက falsetto အမြင့်နဲ့ဆိုလေ့ရှိ တယ်နော် အဲ့လို အသံ ဘယ်လိုရလာခဲ့တာလဲ?
Barry- ဒီလိုပဲဆိုလိုက်တာပဲ... “Nobody gets too much heaven” သီချင်းလိုမျိုးဆိုတုန်းကဆို falsetto အသံများများပါတယ် ... တော်တ်ောများများက လက်ခံကြတယ်....Robin ကဆို အဲ့ဒီသီချင်းကို ပွဲတိုင်းမှာ ဆိုစေချင်တယ်...သူက အောင်မြင်ပြီးရင်း အောင်မြင်ချင်တဲ့ သူမျိုးလေ....
Rahni- ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေထဲ ဘာက ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးလဲ?
Barry- ငါ့မိသားစု...ငါ့ကလေးတွေနဲ့ ငါ့မြေးတွေပေါ့...ဒါတွေကသာ အစစ်အမှန်လေ...
Bee Gees ညီအကို သုံးယောက်ကြားက ချစ်ခင်မှု့ဟာလဲ ပြောစမှက်ပါပဲ...သူတို့သုံးယောက်ပေါင်းမှ တစ်ယောက်ထဲလို ဖြစ်နေတာပါ....Mo က (၂၀၀၃) ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး Robin က (၂၀၁၂)မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်....
Rahni- အဲ့ဒီနှစ်တွေက မင်းအတွက် တော်တော်ဆိုးမှာပဲနော်...
Barry- အဲ့ဒီဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံး တော်တော်ဆိုးတာပါ....Mo ကို ၂ရက်အတွင်းဆုံးရုံးခဲ့ရတယ်....အကောင်းကြီးကနေ ရုတ်တရက်အပြင်းအထန် နေမကောင်းဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားခဲ့တယ်....Robin ကတော့ နည်းနည်းကွာတယ် ...သူ့ကို ကျန်းမာရေး ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ အမြဲထင်ခဲ့တယ်....သူကလဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောမပြဘူး...နောက်ဆုံးတော့ ကင်ဆာကကင်ဆာပဲလေ သိတယ်မလား?...
ငါနောင်တအရဆုံးကတော့ ငါ့ညီတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်ဆုံးတိုင်း ငါတို့ စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ကြတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ဆုံးသွားကြတာပဲ...ဒီနောင်တနဲ့ တစ်သက်လုံးနေသွားရမှာပဲ....ရှင်သန်ခြင်းအကြောင်းကို ခဏခဏတွေးဖြစ်တယ်...ဘာလို့ငါက အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့လူ ဖြစ်ရတာလဲ ငါလဲမသိဘူး...နားလည်အောင် မကြိုးစားတာပဲ ကောင်းပါတယ်...
ဒီနေ့ကစပြီး ငါ့ညီတွေ အကုန်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကို လက်ခံလိုက်ရပြီ...ဒါကတော်တော်ခက်ပါတယ်.....နို့မို့ လက်မခံနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ....ငါတို့ညီအကိုတွေ အရာရာတိုင်းမှာတော့ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်ခဲ့ဘူး...များသောအားဖြင့်တော့ ပျော်ရွင်ခဲ့ကြရတယ်...အခုလို အင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်...ငါအင်တာဗျူးမဖြေတာတော်တော်ကြာပြီ....
Last Bee Gees Goes it alone by SN
Lin Nanda Tun
Posted by ဦးလင္း at 03:53 No comments:
ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံများ ဖောက်ပြန်လေသောအခါ
ဆာယှနာရှူရှန်းစကားယား (Сая́но-Шу́шенская) ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံဟာ ရုရှားနိုင်ငံ၊ ကော့ကေးရှားပြည်နယ် ဆာယားနာဂို့စ်(ခ်) (Саяного́рск) မြို့နားက ယမ်နီဆီမြစ်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားပြီး ရုရှနိုင်ငံ ရေအားလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာလောကအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ စက်ရုံတစ်ခုပါ။
ရုရှနိုင်ငံအတွက်ရေအားလျှပ်စစ်ကနေ အများဆုံး ဓါတ်အားထုတ်ယူပေးနေတဲ့ စက်ရုံဖြစ်တယ်။
အနည်းဆုံး ရေအမြင့်(၆၃၆)ပေ (တမံရေမျက်နှာပြင်နဲ့ ရေထုတ်မြောင်းရေမျက်နှာပြင် ခြားနားချက်) ရှိရင် တာဘိုင်ဆယ်လုံးကနေ (6400) မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ (မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှူ့က ခုလောလောဆယ်မှာ (2000-3000) မဂ္ဂါဝပ်လို့ ခန့်မှန်းရတယ်)။ ရုရှနိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဆိုရင် ခြောက်ခုမြောက် အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တမံတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းရောနိုင်ငံအတွက် မှီခိုအားထားရမှူ့မှာပါ စံပြစက်ရုံတစ်ရုံပါ။
နောက်ထပ် ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုကတော့ တမံကို ငလျင်ဒဏ် ရစ်တာစကေး (၈)အထိ ခံနိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားလို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မပျက်မစီးနိုင်တဲ့ တမံတစ်ခုအဖြစ် ဂင်းနစ်မှက်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါပဲ။
ဒီလိုဖြစ်ရပ်ဆိုးမဖြစ်ခင် အချိန်အထိတော့ လူတွေတော်တော်များများက ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုတာ အန္တရာယ်အကင်းဆုံး ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှူ့လို့ ယူဆထားကြတာပါ။
တာဘိုင်အမှက်(၂)ဟာ၂၀၀၉ခုနှစ် အဖြစ်အပျက် မတိုင်ခင်ကတည်းက ဒုက္ခပေးနေတာကြာပါပြီ။ စက်စဆင်တဲ့ ၁၉၇၉ ခုနှစ်ကတည်းကရေမလုံတဲ့ပြဿနာ၊ တုန်ခါမှူ့ များတဲ့ပြဿနာတွေ တောက်လျောက် ဖြစ်နေတာပါ။ ၂၀၀၀ခုနှစ်တုန်းကလဲရေသွင်းပြွန်မှာ လက်မဝက်လောက်နက်ပြီး ငါးပေလောက်ရှိတဲ့ အက်ကွဲကြောင်းကြီး ပေါ်လာလို့ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။
၂၀၀၉ခုနှစ် မတ်လမှာတော့ စက်အမှက်(၂) ကို အီလက်ထရောနစ်-ဟိုက်ဒရောလစ်အလိုအလျောက် လည်ပတ်နုန်းထိန်းညိုစက် တပ်ဆင်ပေးပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတောအတွင်းတာဘိုင်ပန်ကာအရွက်တွေနဲ့ ရေသွယ်ပြွန်တွေမှာ အက်ကြောင်းတွေ ရေတိုက်စားတဲ့ အခေါင်းပေါက်တွေတွေ့လို့ ဝရိန်ပြန်ဖို့ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တာဘိုင်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် စနစ်တကျ မချိန်ညိုခဲ့ကြဘူး။
ဒီပြင်ဆင်မှူ့ပြီးတဲ့ အချိန်မှာအမှက်(၂)တာဘိုင်ရဲ့ တုန်ခါမှူ့ဟာ (ဝ.၁၅)မီလီမီတာ ထိအောင်တိုးလာပါတယ်။ ဒါဟာ သက်မှက်ချက်ထက်မကျော်သေးပေမယ့်ကာလတာရှည်မောင်းနှင်မယ်ဆိုရင်တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာတော့ တုန်ခါမူ့ဟာတော်တော်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စက်မောင်းတဲ့သူတွေဟာ ဝန်အား (၆၀၀)မဂ္ဂါဝပ် ကနေ(၂၀၀)မဂ္ဂါဝပ် အထိလျော့ချလိုက်ပါတယ်။
(၁၇)ရက်နေ့ မနက်သုံးနာရီမှာ (၆၀၀)ကိုပြန်တင်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာတုန်ခါမှူ့က (ဝ.၈၄)မီလီမီတာ ရှိနေပါပြီ။ ဒါဟာ တခြားစက်တွေနဲ့ယဉ်လျင် လေးဆလောက်ပိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီလိုတုန်ခါမူ့တွေနဲ့ ရင်းနှီးနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိလို့ သိပ်ပြီးစိုးရိမ်စိတ် မရှိကြပါဘူး။ ဒီစက်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့သူက အာမခံနှစ်သုံးဆယ် ပေးပါတယ်။ အခုလိုမတော်တဆဖြစ်တော့ ၂၉နှစ်နဲ့၁၀လရှိပါပြီ။
ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာတော့ အလုပ်သမားပေါင်း (၃၉၉) ရောက်အလုပ်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက (၇၅)ယောက်ကတော့ အိမ်ပြန်ရောက်မလာနိုင်တော့ပါ။
အဲ့ဒီနေ့ကသန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမားတွေဟာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း တာဘိုင်ခန်းကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကတော့ အဝတ်အစားလဲပြီး အလုပ်မစခင် ကော်ဖီသောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ထိန်းချူပ်ခန်းထဲမှာတော့ တာဝန်ကျတွေဟာ မနေ့ညအဆိုင်းက ဘာတွေမှက်တမ်းတင်ထားသလဲဆိုတာကို စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီအဖြစ်အပျက်မဖြစ်ခင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပါ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်သြဂုတ်လ၁၇ရက်နေ့ မနက် (ဂး၁၃)မိနစ်မှာတော့ တာဘိုင်အမှက်(၂)ဆီက ကျယ်လောင်တဲ့ ပေါက်ကွဲသံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ တာဘိုင်အဖုံးဟာ အပေါ်ကိုလွင့်သွားပြီး တန်(၉၂၀)လေးတဲ့ တာဘိုင်နဲ့ဂျင်နရေတာဝင်ရိုးဟာတပ်ဆင်ထားတဲ့နေရာက လွတ်ထွက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အမှက်(၂) ရေသွယ်ပြွန်ကတစ်ဆင့်ရေတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်လာပြီး တာဘိုင်ခန်းမနဲ့ သူ့အောက်ကအထပ်တွေကို ရေလွမ်းမိုးသွားပါတယ်။
အဖြစ်ဆိုးကလွတ်မြောက်လာတဲ့ ဝန်ထမ်း အိုလက်မီအာဂီရှိဗ် ပြောပြတာက
“ ဆူဆူညံညံအသံတွေကြားမိတော့ ကျနော် အပေါ်ထပ်ကအခန်းကနေ လှမ်းကြည့်မိတယ်။ တာဘိုင်အမှက်(၂)ရဲ့ အဖုံးဟာအပေါ်ကိုကြွတက်လာပြီး လွင့်ထွက်သွားပါတယ်။ တာဘိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးအပေါ်ကို သုံးမီတာလောက်မြောက်တက်လာပြီးတော့ လည်နေတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော် ကိုယ့်မျက်လုံးကို မယုံနိုင်အောင်ပါပဲ။ကျောက်တုံးတွေ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အရပ်မျက်နှာတိုင်းကို လွင့်ပြန့်နေတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတွန့်ခေါက်နေတဲ့ တာဘိုင်အဖုံးဟာ ခေါင်မိုးကိုတောင်ထိတော့မှာပါ။
စက်ရုံခေါင်မိုးကတော့ပျက်စီးသွားပါပြီ။ ကျနော့စိတ်ထဲကနေတွက်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျ။ ရေတွေဟာ တစ်စက္ကန့်ကို (၃၆၀)ကုဗပေနုန်းနဲ့ တိုးထွက်နေတယ်လို့ ခန့်မှန်းမိတယ်။ နောက်ပြီးကျနော် တာဘိုင်အမှက်(၂)နဲ့ဝေးရာတာဘိုင်အမှက်(၁၀) ဘက်ကိုပြေးလိုက်တယ်။ ဒီထက်မြင့်ရာကို ထပ်တက်လိုက်တယ်။ နောက်ပြိးပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစက်ရုံတစ်ခုလုံး တော်တော်ပျက်စိးနေပါပြီ။ လူတွေလဲ ရေထဲမှာ ကူးခတ်နေတာကို တွေ့ရတယ်ဗျ။
ကျနော့စိတ်ထဲမှာတွေးနေမိတာကတော့ လူတွေကိုယ်တိုင် ရေတံခါးတွေကို ပိတ်ရတော့မယ်ဆိုတာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ အလိုအလျောက်ကာကွယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ တစ်ခုမှအလုပ်မလုပ်တော့သလို၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလဲလုံးဝ မရှိတော့လို့ပါ။”
အရေးပေါ်သတိပေးချက်ကိုထိန်းချုပ်ရေးစခန်းက လက်ခံရရှိခဲ့ပြိး တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှူ့ကလဲ သုညအထိထိုးကျသွားပါတယ်။စက်ရုံတစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်လို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
လုံခြုံရေးတာဝန်ကျ အလက်ဇန္ဒြား ကတော့
“ တာဘိုင်ထပ်ကပေါက်ကွဲသံကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမြင်နိုင်ပေမယ့် ကောင်းကောင်းကြားလိုက်ရတယ်။ပထမအသံက ခပ်ကျယ်ကျယ်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခါကတော့ ပေါက်ကွဲသံပါ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ စက်ရုံတစ်ခုလုံးအမှောင်ကျသွားပါတယ်။ ကျနော်က အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တံခါးကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ တံခါးဆီကိုသွားဖို့ကြိုးစားပေမယ့် မရပါဘူး။
ကျနော့်ဖုန်းမှာ ဓါတ်မီးပါတော့ ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ပြိးတော့တံခါးဆီ ရောက်အောင်သွားပြီးလှေကားအတိုင်း ပြေးထွက်ခဲ့တယ်။
နောက်မှာတော့ မီးခိုးနဲ့ ရေလုံးကြီးဟာ လိုက်လာနေလို့ကျနော်လှည့်တောင်မကြည့်ရဲပါဘူး။ နံရံထောင့်တစ်ခုကို ရောက်တဲ့အခါမှာ အမျိုးသမိးနှစ်ယောက်ရပ်နေတာတွေ့တယ်။ သူတို့ဘယ်ကို ပြေးရမှန်းမသိဘူး။ ကျနော့နောက်ကို လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပြီးဥမင်လမ်းတစ်လျောက် တမံပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်။”
သူဟာ ရေလှောင်တမံနံရံအတွင်းထဲကနေ ပေ (၂၄၀) မြင့်တဲ့ တမံထိပ်အထိရောက်အောင် (၁၈)မိနစ်ကြာ တက်ခဲ့ရပြီး တမံပေါ်ကနေ ပြန်ငုံကြည့်လိုက်တယ်။
“ ကျနော်ငုံကြည့်လိုက်တော့စက်ရုံရဲ့ တာဘိုင် ခေါင်မိုးဟာ မရှိတော့ပါဘူး။ ရေဘယ်ကထွက်နေတယ် ဘယ်ဟာတွေ ပျက်စိးသွားတယ်ဆိုတာမြင်နေရပါတယ်။”
အလက်ဇန္ဒြားနဲ့နောက်ထပ်လူ (၇)ယောက်ဟာရေထိန်းတံခါးတွေကို လူအားနဲ့ ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်။
အခိုက်အတန့်တော့ပြဿနာ တစ်ခုဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တန်းအဓိကကျတာက ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ နိုးဖို့ပါ။စက်မလည်တော့တဲ့အတွက် ကန်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာရင် တမံတစ်ခုလုံး ကျိူးပျက်သွားနိုင်ပြီးအနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ ဆာယားနာဂို့စ်(ခ်)မြို့ဟာ နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအတွက် ရေပိုလွဲတံခါးတွေ ဖွင့်ပေးဖို့အတွက်လျှပ်စစ်မီးလိုလာပြန်ပါတယ်။
(၁၁း၃၂)နာရီမှာတော့ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာကနေ အပေါ် ရေလှောင်တမံကို ဓါတ်အားပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ရေပိုလွဲတံခါးတွေ ပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ ရေလှောင်တမံ တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့အဓိကအချက်ပါပဲ။
ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်တာဘိုင်အမှက်(၂)အပါအဝင် အမှက်(၇)နဲ့(၉)တို့လည်း လုံးဝနီးပါး ပျက်စီးသွားပါတယ်။ တာဘိုင်အမှက်(၁)နဲ့(၃)ကတော့ အမိုးပြုတ်ကျလို့ အလည်အလတ်စား ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ ကျန်တဲ့တာဘိုင်တွေကတော့အသေးစား မျှသာ ပါပဲ။
ဒီဖြစ်ရပ်မှာထရန်စဖော်မာ နှစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့လို့ ထရန်စဖော်မာဆီတွေ တန်လေးဆယ်လောက် မျောပါသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ် မိုင်ငါးဆယ်လောက်ရှိတဲ့ ယမ်နီဆီမြစ်ထဲ ဖုံးလွမ်းသွားခဲ့တယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်းမှာပျက်စီးသွားတဲ့ တာဘိုင်တွေကို လူအင်အား (၂၀၀၀) ခန့်သုံးပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေတာ လေးနှစ်နီးပါးရှိသွားပါပြီ။ပြင်ဆင်စရိတ်ကတော့ အင်ဂျင်ခန်းတစ်ခုတင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၃)ဘီလီယမ် ကုန်ကျပါတယ်။
တာဘိုင်အမှက် (၅)နဲ့(၆)ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ၂၀၁၀ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄မှာ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က စက်ခလုတ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့စက်တွေကို ၂၀၁၄ခုနှစ်အပြီး စက်အသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးနိုင်ခဲ့တယ်။
Posted by ဦးလင္း at 00:21 No comments:
ကမ္ဘာကြီးမှာ အရှုပ်ထွေးဆုံး သတ္တဝါတွေက ခပ်ကြီးကြီးဦးနှောက်၊ ခြေ၂ ချောင်းပေါ်လမ်းလျောက်ပြီး နို့တိုက်သတ္တဝါတွေ ဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ လူသားတွေပါပဲ။ ကျနော်တို့ဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အခြေခံ ဒြပ်စင်တွေကနေ အခုလို ကမ္ဘာကြိးကို စိုးမိုးချယ်လှယ်ပြီး လိုရာပုံသွင်းနိုင်တဲ့ လုူသားအဖြစ်ထိအောင် အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာကြတယ်။
အစကနေ အခုအခြေအနေတွေအထိ နာရီတွေကို နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင် ကျနော်တို့ သိမြင်ထားတဲ့ အခြေခံအချက်တွေဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း သန်းလေးထောင် လောက်ကို ပြန်ကြည့်ရင် ကျနော်တို့ လူသားတွေရဲ့ သမိုင်းဟာ အလှည့်အပြောင်း အနိမ့်၊အမြင့် အတက်၊ အကျ အပြည့်နဲ့ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ သဘာဝတရားရဲ့ ဘေးဒဏ်တွေ၊ သားရဲတိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့ ခြိမ်းချောက်မှု့တွေကြောင့် မုဆိုးအဖြစ်ကနေ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေ မျိုးတုန်းမဲ့ အန္တရာယ်တွေနဲ့ မကြာခဏ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
ကုန်းမြေပေါ်မရောက်ခင် ရေထဲကဘဝကို ပြန်ကြည့်ရင်လဲ ရှင်သန်ဖို့ အမျိုးမျိုးရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ငါးမဖြစ်ခင် ပိုးမွားတွေ အဖြစ် အဲ့ဒီကနေတဆင့် ပိုးမွားတွေမဖြစ်ခင် ပထမဆုံး သက်ရှိဘဝဖြစ်တဲ့ Single Cell ဘဝကို ပြန်ကြည့်ရင် လူသားဆိုတာ တော်တော်ကို ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ အခြေအနေတွေ တိုက်ဆိုင်လွန်းလို့သာ ဖြစ်လာရတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ပေါင်းသန်း ၄၀၀၀
ကျောက်တုံးအစိုင်အခဲတွေနဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေဟာ နေအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ လှည့်ပတ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးပါ။ ရေအောက်မီးတောင်ပေါက်ကွဲတာတွေ ဥက္ကာခဲ ပင်လယ်ထဲ ကျရောက်တာတွေ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေကြောင့် သက်ရှိတစ်ကောင်တစ်မြီးမှမရှိတဲ့ ချော်ရည်အပြည့်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ သက်ရှိ မျိုးစိတ်ပေါင်း ကိုးသန်းကျော် နေထိုင်မဲ့နေရာအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတော့မယ်။
ယူဆချက်ပေါင်းများစွာရှိပေမယ့် သက်ရှိတွေ ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ အသေအချာတော့ ဘယ်သူမှ ကံသေကံမ မပြောနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုကတော့ ရေမရှိဘဲ သက်ရှိဖြစ်မလာဘူးဆိုတာပါ။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ ကတော့ ဥက္ကာခဲတွေ ကြယ်တံခွန်တွေ ဟာ သက်ရှိတွေဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အမို်င်နိုအက်ဆစ် တွေ သယ်ဆောင်လာတယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြတယ်။
ဥက္ကာခဲတွေ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲ ကျရောက်နေတာကြောင့် ရေဟာ ဓါတုဒြပ်ပေါင်းတွေ သက်ရှိအခြေခံ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရောထွေးလို့နေပါပြီ။ အချိန်ရယ် နေရာရယ် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အခြေအနေမှာ ဗို့အားသိန်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတို့က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ အခြေအနေတခု ဖြစ်ပျက်စေပါတယ်။ ဓါတုအက်တမ်တွေ အစီအစဉ်တကျ ပေါင်းစည်းသွားမိပြီး DNA သက်ရှိအခြေခံပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ဒီလိုဓါတုဗေဒဒြပ်ပေါင်းတွေဟာ သာမန်အားဖြင့်တော့ ဒီလောက်ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သက်ဆိုးရှည်လေ့မရှိကြပါဘူး။ နောက်တစ်ခါ ကံကောင်းပြန်ပါပြီ။ အနားကအဆီခဲ တချို့ ဖုံးလွမ်းသွားမိပြီး ပထမဆုံးသော သက်ရှိဆဲလ် တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ပေါင်းသန်း ၃၅၀၀
ဒီအချိန်မှာ အထူးခြားဆုံး အရာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက တော့ သက်ရှိဆဲလ်လေးဟာ သူ့ဟာသူ ပုံတူပွား လာတာပါပဲ။ ဒီဆဲလ်ထဲက DNA အချက်အလက်တွေဟာ မျိုးဆက်တစ်ခုကနေ နောင် ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း မျိုးဆက်ပျက်မသွားအောင် ပါရှိနေမှာပါ။ လက်ရှိ တည်ရှိသမျှ သစ်ပင်တွေ လူတွေ တိရိစ္ဆာန်တွေ ပိုးကောင်တွေ မှန်သမျှရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို လိုက်ကြည့်ရင် ဒီသက်ရှိဆဲလ်လေးတစ်လုံးက စတာကို တွေ့ရမှာပါပဲ။
ဆဲလ်လေးမျိုးဆက်ပြတ်မသွားအောင် သူ့ရဲ့ ဗီဇက နှစ်ကိုယ်ခွဲပြီး မျိုးပွားဖို့ အမိန့်ပေးနေပါတယ်။ နောင်နှစ်ပေါင်း သန်းနှစ်ထောင်လောက်ထိအောင် ကမ္ဘာကြီးမှာ ဒီလို တစ်လုံးတည်းသော သက်ရှိဆဲလ် တွေပဲရှင်သန်နေထိုင်ပါတယ်။
မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှု့တွေကြောင့် အရာရာတိုင်း ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်တစ်လုံးတည်းပါတဲ့ သက်ရှိတွေ အချင်းချင်း မတော်တဆ ပူးပေါင်းမိရာက သူတို့ရဲ့ ဗီဇတွေပါ ပေါင်းစည်းကုန်ပါတယ်။ ဆဲလ်နှစ်လုံး သက်ရှိတွေ မျိုးပွားရာကနေ ဆဲလ်နှစ်ခု ပါတဲ့ သက်ရှိတွေဖြစ်လာပါပြီ။
တစ်နေ့မှာ ဆဲလ်တွေအလိုလို ပုံတူမျိုးပွားတဲ့ အစီအစဉ်ကို မတော်တဆ ဖျက်မိလျက်သား ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ ဆဲလ်တွေ သန္ဓေပြောင်းသွားပြီး တဖြေးဖြေးနဲ့ မိခင်ဆဲလ်နဲ့ လုံးဝခြားနားတဲ့ ဆဲလ်တွေ ပွားများလာလိုက်တာ မျိုးစိတ်မတူတဲ့ ဆဲလ်တွေ သန်းထောင်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်လာတဲ့အထိပါ။ အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုကတော့ လူတွေဖြစ်လာမယ့် မျိုးစိတ်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် သန်းပေါင်း ၅၅ဝ
ပင်လယ်၊ သမုဒ္ဒရာအောက်မှာ ပွားများလာတဲ့ ဆဲလ်တွေဟာ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ ရှုပ်ထွေးလာလိုက်တာ ကျနော်တို့ ဘိုးဘွားဖြစ်လာမယ့် သုံးလက်မအရွယ် ရေတီကောင် ဖြစ်လာတဲ့တိုင်အောင်ပါ။ သန္ဓေပြောင်းလဲခြင်းဟာ အစစအရာရာ ကွာခြားတဲ့ လိင် ကွဲပြားခြားနားခြင်း၊ ပိုမိုရှုပ်ထွေး များပြားတဲ့ Gene တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ အထီး အမ ဆိုတာ ဒီနေရာက စတာပါ။
သက်ရှိမှန်သမျှ အမြင်အာရုံ ဆိုတာ မရှိတဲ့အတွက်ရေတီကောင်လေးတွေဟာလဲ အချင်းချင်း ဆုံနိုင်ဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ နက်ရိုင်းလှတဲ့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ အောက်မှာ ဒီအကောင်တွေ အချင်းချင်း မြင်ရဖို့အတွက် သဘာဝတရားကြီးရဲ့ ဖန်တီးမှု့တွေ ပါလာပါပြီ။ အရေပြားဆဲလ်တစ်ချို့ဟာ အလင်းအာရုံခံ ဆဲလ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ အခုဆိုကျနော်တို့ဟာ ရန်သူ မိတ်ဆွေ ပိုမြင်လာရပြိး အသက်ပိုရှည်လာတယ်၊ သားကောင် ပိုရှာလာနိုင်တယ်၊ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားမှု့ ပိုလုပ်လာနိုင်တယ်။ ဒီလို မရေတွက်နိုင်တဲ့ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားမှု့ကနေ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အလင်းအာရုံခံစနစ်ဖြစ်လာပြန်တယ်။ ဒိလိုနဲ့ သဘာဝတရားကြိးက ကျနော်တို့ဘိုးဘွားတွေကို မျက်လုံးဆိုတဲ့အရာ စတင်ပေးခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့အခုဆို မြင်ရပါပြီ။မြင်သမျှ အရာတွေဟာ ဆဲလ်တစ်လုံးတည်းကနေ ပွားများလာတဲ့ အရာတွေပါ။ မြင်သမျှကို သိဖို့ကလိုသေးတယ်မလား။ မျက်လုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အာရုံခံ ဆဲလ်သေးသေးလေးတွေ စုဝေးလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပ်ထိပ်ဖျားလောက်တောင် မကြီးသေးပါဘူး။ တစ်နေ့မှာ သဘာဝတရားဖန်တီးတဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံး နဲ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး ဦးနှောက်ဆိုတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၅၂၁
ဒီအချိန် ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ပထမဦးဆုံး ဦးနှောက် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က ကျနော်တို့ဟာ ငါးတူသတ္တဝါ မီလိုကူမင်းနီးယား Myllokunmingia အဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ။ ဦးနှောက်ဟာ သာမန် အခြေခံ အချက်အလက်တွေ ဆုံးဖြတ်တာမျိုးကိုပဲ လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေးဦး ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကို စိုးမိုးနေတဲ့ အနိုမာလိုကာရစ် လို သတ္တဝါတွေရန်က လွတ်မြောက်အောင် မစွမ်းနိုင်သေးပါဘူး။
ကျနော်တို့ မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်လွယ်လွန်းလှတဲ့ အခြေအနေပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဖြစ်တည်ဖူးသမျှ မျိုးစိတ်တွေရဲ့ ၉၉% ဟာ မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကံကြမ္မာရဲ့ မျက်နှာသာပေးမှု့က မီလိုကူမင်းနီးယားကို ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ ဖန်တီးပေးနေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀၀
အနိုမာလိုကာရစ် လို သတ္တဝါတွေ ရန်ရှောင်တိမ်းရင်းနဲ့ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း သန်းလေးရာ ရောက်တဲ့အခါမှာ မီလိုကူမင်းနီးယားဟာ မေးရိုးတွေ သွားတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဒီလိုပေါ်ထွက်လာတာကြောင့် ပိုစားနိုင်လာတယ်၊ အရွယ်အစားလဲ ပိုကြီးလာတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၇၅
ကျနော်တို့ဟာ တစ်ပေအရှည်ရှိတဲ့ အရိုးမာချပ်ကာငါး ဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ့်ထက် ကြီးမားတဲ့ ငါးကြီးတွေကြောင့် ကျနော်တို့ဟာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကို မကြီးစိုးနိုင်ပါဘူး။ ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ မျိုးတုန်းခံမလား ထွက်ပြေးမလားဆိုတာပါပဲ။ စိမ့်တောဘက်ကို ထွက်ပြေးတဲ့ အခါမှာ ငါးကြိးတွေရန်ကတော့ လွတ်သွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရေတိမ်ပိုင်းမှာ အောက်ဆီဂျင် အလုံအလောက်မရှိပြန်ပါဘူး။ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီး ဆဲလ်တွေ သေဆုံးကုန်ပါတယ်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် အဆိပ်ငွေ့တွေ သွေးထဲဝင်ရောက်လာတာကြောင့် ရေနက်ပိုင်းကို ပြန်သွားဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ရေတိမ်ပိုင်းမှာလဲ မနေနိုင်တာကြောင့် ကျနော်တို့ သွားစရာလမ်းက တစ်ခုပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
ဆဲလ်တစ်လုံးနဲ့ သက်ရှိ အဆင့်ကနေ အရိုးမာချပ်ကာငါး တစ်ကောင်အဖြစ် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲဖို့ရာ ကျနော်တို့ဟာ နှစ်ပေါင်းသန်းသုံးထောင်ကြာခဲ့တယ်။ အခုတော့ ကျနော်တို့ အနာဂတ်ဟာ စိတ်ပျက်စရာအပြည့်နဲ့ပါ။
သဘာဝတရားရဲ့ မျက်နာသာပေးမူ့က ကျနော်တို့ကို ကယ်တင်ပြန်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဘယ်ငါးမှ မလုပ်ဘူးတဲ့ အရာတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက လေကို ရူရိုက်လိုက်တာပါပဲ။ လေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဖြတ်ပြိး အဂါၤအသစ်ဆီရောက်သွားတယ်။ အဲ့ဒါက အဆုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ လေကို ရှုူနိုင်ပါပြီ။ အခုဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ လေထဲမှာရော ရေထဲမှာပါ အသက်ရူနိုင်တဲ့ အိချ်သီယိုစတီးဂါး
Ichthyostega တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။
ရေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လေပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ဟာ လေပြွန်ကို ပါးဟပ်နဲ့ အဆုပ်ကြား အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီး အသက်ရှုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၆၅
ကျနော်တို့ဟာ ရေထဲကနေခေါင်းပြူပြီး စိမ့်တောတွေ ကို နုတ်ဆက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အရှေ့မှာ တော့ ကျယ်ပြောလှပတဲ့ ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေက စောင့်ကြိုနေပါတယ်။ ရွေးချယ်မှု့က ရိုးစဉ်းလှပေမဲ့ အကျိုးဆက်က ကြီးမားလှတယ်။ ကျနော်တို့ ဟာ ကိုယ့်ဟာကို ရေထဲကထွက်ခဲ့ပြီး သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ရပ် ရေးဆွဲခဲ့ပြန်ပါပြီ။
ပူပြင်းလှတဲ့ နေရာင်ခြည်ဟာ ကျနော်တို့ အရေပြားကို ခြောက်သွေ့စေပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ မြေပြင်အနေအထားဟာ နူးညံ့တဲ့ ခြေထောက်တွေကို စုတ်ပြဲစေတယ်။ အိချ်သီယိုစတေဂါ
Ichthyostega တွေဟာ ရေထဲကနေ ကုန်းပေါ်တက်ခဲ့တဲ့ ငါးတွေပါ။
စိမ့်တောတွေကနေ မျိုးတုန်းမဲ့ အန္တရာယ်ကနေ ကျော်လွားဖို့ ကျနော်တို့ ကုန်းပေါ်တက်ခဲ့ပါပြီ။ တကယ်တော့ အရင် အန္တရာယ်အဟောင်းတွေကိုသာ ရှောင်လွဲနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် အန္တရာယ် အပြည့်နဲ့ ကမ္ဘာသစ် တစ်ခုဆီ ရောက်လာတာပါ။
နေရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ဖို့ သဘာဝတရားကြိးက ကျနော်တို့ိုကို ပိုမိုထူထဲတဲ့ အရေပြား လက်ဆောင်ပေးပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နောင်တစ်ချိန် လက်သည်းဖြစ်လာမဲ့ လက်စွယ်တွေရောပေါ့။ ဒီလက်စွယ်တွေက ကြမ်းတမ်းတဲ့ မြေသားပြင်ကို ကုတ်တွယ်ဖို့ လွယ်ကူစေတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာ နေသားကျနေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဥတွေက တော့ ပူပြင်းတဲ့နေဒဏ်က ကာကွယ်ဖို့ အကာအကွယ် အခွံမာမာ လိုနေပါသေးတယ်။ ပြဿနာက အိချ်သီယိုစတီးဂါ တွေဟာ အခွံမာဥကို ဥဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။ သူတို့ ဟာ အမရဲ့ ကိုယ်ထဲမှာ မျိုးအောင်မဲ့ အစီအစဉ်ကို တွေ့ရှိသွားတယ်။ ကျနော်တို့ သိတဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ ဒီကစတာပါ။ ဒီတွေ့ရှိချက်က ဆင့်ကဲပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်မှာ တကယ် အရေးပါတယ်။ အခွံမာတဲ့ ဥတွေ သန္ဓေသားလောင်းတွေဟာ အမရဲ့ ကိုယ်ထဲမှာ ဖြစ်တည်နိုင်ပြီး အခွံမာဥတွေ ကို ဥနိုင်ပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၄၀
လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ မျိုးပွားဖို့ အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ မျိုးသုန်းခြင်းဒဏ်က ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒီကျေးဇူးကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၄၀ အကြာမှာတော့ ကျနော်တို့ရဲက ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေဟာ ကုန်းမြေပေါ်မှာ တစ်သက်လုံးနေဖို့ဖြစ်လာရတယ်။
အရင်တုန်းကကြုံတွေ့ရတာနဲ့စာရင် ဒါတွေဟာ ကမ္ဘာအသစ်ပါ။ ကျနော်တို့ လေကိုရှုနိုင်ပြီ၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုသယ်ပြီး သွားလာနိုင်ပြီ။ မြင်ကွင်းအသစ်တွေ အသံတွေ၊ အနံတွေကို ရင်ဆိုင်လာရပါတော့တယ်။ အချက်အလက်တွေ များလာသလို ဦးနှောက်ကလဲ ဖွံဖြိုးလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ပိုပြီး ထက်မြက်လာကြတယ်။
ပထမဆုံး ကုန်းပေါ်တက်လာတဲ့ သတ္တဝါတစ်ကောင်ကနေ မျိုးစိတ်ပေါင်း များစွာထိ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ လာကြတယ်။ မျိုးစိတ်တွေ များလာတာနဲ့ အမျှ အစားအစာ ရှားပါးလာပြန်ပါတယ်။ သန္ဓေပြောင်းလဲခြင်းကနေ ပိုမိုသန်မာတဲ့ မေးရိုးနဲ့ ကြွက်သားတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ဒါကအများကြီး အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပိုပြီးမြန်မြန်နဲ့ မာျးများ စားနိုင်လာတယ်ပြီး အသားစားနိုင်ဖို့ အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်လာရတယ်။ အရင်က အစာလုဘက်တွေက သားကောင်အဖြစ် ပြောင်းသွားပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၂၅၀
ကျနော်တို့ရဲ့ သမိုင်းခရီးဟာ နိမ့်မြင့်တက်ကျနဲ့ပါ။ အခုဆိုရင် ကံနိမ့်တဲ့ အပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၂၅၀မှာတော့ သက်ရှိတွေနဲ့ မိုင်ပေါင်း ထောင်ချီဝေးတဲ့ အခု ဆိုက်ဘေးရီးယား နေရာမှာ ကမ္ဘာမြေကြီး ရဲ့ကျောက်လွာတွေ ကွဲထွက်လာပြိး ချောရည်ပူတွေ မူတ်ထုတ်ပါတယ်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံလောက် ကျယ်ဝန်းပြီး နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း သိန်းငါးရာလောက်ထိ ကြာပါတယ်။ အဆိပ်သင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် တန်သန်းပေါင်းများစွာ လေထဲကို ထုတ်လွတ်ပြီး ကမ္ဘာ့လေထုထဲမှာ ပိတ်မိနေပါတယ်။
လေထုအပူချိန် တစ်ရာကျော်ထိမြင့်တက်လာပြီး အပင်နဲ့ အပင်စားသတ္တဝါတွေ၉၅% သော မျိုးစိတ်တွေ သေကြေပျက်စီးကြရတယ်။ ရှင်သန်ကျန်ရစ်တဲ့ မျိုး စိတ်အနည်းငယ်ထဲမှာ ကျနော်တို့ နဲ့ နောင်တစ်ချိန် ဒိုင်နိုဆော ဖြစ်လာမယ့် မျိုူးစိတ်အချို့ပါတယ်။
မီးတောင်ပေါက်ပြီး နောက်နှစ်ပေါင်း သန်း၃၀ အကြာမှာ ကျနော်တို့ဟာ ကြောင် အရွယ်ရှိတဲ့ ပုတ်သင်ညို အကြိးစား တစ်ကောင်နဲ့ တူတယ်။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေထဲမှာ အရပ်ငါးပေမြင့်တဲ့ ဟာရာရာဆောရပ်စ် herrerasaurus တွေလဲပါတယ်။သူတို့ဟာ ရေပုတ်သင်တွေကနေ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ လာကြတာပါ။
ကျနော်တို့ ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေဟာ လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲမှု့မှာ အင်မတန်လျင်မြန်တယ်။ သန်မာ ပြီး အမြဲဆာလောင်နေတဲ့ ဒိုင်နိုဆောတွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲစတင်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ရဲ့ မျော်လင့်ချက်က သဘာဝတရားကြီးပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ နောင်နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ကျနော်တို့ဟာ ဒိုင်နိုဆောတွေရန်ကလွန်အောင် သေးကွေးသွားပြီး မြေတွင်းတွေထဲမှာ နေထိုင်ပါတယ်။
နောင် နှစ်ပေါင်း ၂၂ သန်းအတွင်းမှာတော့ ကျနော်တို့ဟာ အာရုံတွေ ပိုမိုထက်မြက်လာပြီး နားရွက်တွေ ဖြစ်ထွန်းလာတယ်။ ဒိုင်နိုဆောတွေ ကိုယ့်ကို မမြင်ခင် ရှောင်တိမ်းဖို့ အနံခံတတ်လာတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်းမှာ Neocotex တွေပေါ်လာပြီး အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သုံးသပ်ကာ အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်တတ်လာတယ်။ အဲ့ဒီ အရာတွေကပဲ တစ်နေ့မှာ စိတ်ကူးညဏ်တွေ တီထွင်နိုင်စွမ်းတွေ ဘာသာစကားတွေကို ဖန်တီးလာမှာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၆ သန်း
့ ကျနော်တို့ဟာ နှစ်လက်မသာသာရှိတဲ့ ကြွက်တူ သတ္တဝါ ဖြစ်လာပါပြီ။ လူသားတွေရဲ့ အနာဂတ်ဆိုတာ ဒီကြွက်တူ သတ္တဝါလေးရဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ လျှင်မြန်တဲ့ ဦးနှောက်ပေါ် အများကြီးမူတည်နေပါတယ်။ တခုခု အမှားအယွင်းရှိတာနဲ့ လူဆိုတာ ဘယ်တော့မှာ ပေါ်ပေါက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒိုင်နိုဆောတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာဟာ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ပါပဲ။ သူတို့ကြောင့် ကျနော်တို့မှာ အင်မတန်အစွမ်းထက်လှတဲ့ အာရုံခံနိုင်စွမ်းတွေ၊ မြန်ဆန်လှတဲ့ ဦးနှောက်တွေ ရရှိလာတယ်။ သူတို့သာမရှိရင် ကျနော်တို့ဟာ ဥဥတဲ့ အဆင့်ပဲရှိဦးမှာပါ။ နောက် မျိုးဆက်တွေကို ဒိုင်နိုဆောတွေရန်က ကာကွယ်ဖို့ ကြွက်တူ သတ္တဝါတွေဟာ ဥ မဥဘဲ အကောင်လိုက်မွေးလာကြတယ်။ အကောင်ပေါက်လေးတွေ သူ့ဟာသူ အစာရှာစားမယ့်အစား၊ နို့တိုက်ကြီးပျင်းစေတယ်။ ဒါဟာ လူ့သမိုင်းဖြစ်စဉ်မှာ ကြီးမားတဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု့ပါ။
ဒီအကောင်သေးသေးလေးကနေ လူတို့ ဝေလငါးတို့ အထိ မျိုးစိတ်ပေါင်း လေးထောင်ကျော် ပွားများလာတယ်။ နို့တိုက် သတ္တဝါတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ။ ကျနော်တို့ ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာအောင် ဒိုင်နိုဆောတွေက ကူညီခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဟာ မုဆိုးဘဝကို ဆုံးရုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒိုင်နိုဆောတွေဟာ နောက်ထပ် နှစ်သန်းပေါင်း ၁၆၅ နှစ် တိုင်အောင် ကြီးစိုးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို ဘယ်သူမှ မထိန်းချုပ်နိုင် ကြပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၆၅ သန်း
မိုင်ပေါင်း ၁၈၀၀ လောက်ဝေးတဲ့ အခုမက္ကဆီကို ကျွန်းဆွယ် နေရာမှာ ဥက္ကာခဲတစ်ခု ကျရောက်လာပါတယ်။ ခပ်သေးသေး ကြွက်တူ သတ္တဝါလေးဟာ သူ့အသက်လွတ် အောင်ပြေးရမယ့် အခြေအနေရောက်လာပါပြီ၊
ကျောက်တုံးတွေ စိစိညက်ကြေသွားပြီး ကမ္ဘာမြေကြီတစ်ခုလုံး ဖုန်မှုန့်တွေ လွမ်းကုန်ပါတယ်။ ကြွက်ကလေး အသက်ရှင်ဖို့က မြေကြီးကို တူးနေဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ မီးခိုးတွေနဲ့ ပြာမှုန်တွေဟာ နေရောင်ခြည် မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ကာထားသလိုပါပဲ။ သဘာဝပေါက်ပင်တွေ အကုန်သေဆုံးကုန်တယ်။ ဒိုင်တွေဆောတွေတော့ ပြဿနာတက်နေပါပြီ။ သူတို့ဟာ အကောင်ကြီးသလောက် အစာချက်နုန်းမြန်ကြတယ်။ အစာ မရှိတော့ ဒိုင်နေဆောတွေ မရှေးမနှောင်း သေကုန်ကြရတယ်။
အကောင်ကြီးတွေ မရှိတော့ အကောင်သေးတွေ အတွက် အခွင့်အလမ်း ပိုများလာတယ်။ ပေါများလာတဲ့ ပိုးကောင်တွေဟာ ကြွက်တူ သတ္တဝါလေးအတွက် အစာ ဖြစ်လာပြန်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၆၄
ကျနော်တို့ရဲ့ ပိုးကောင်စား ကြွက်တူလေးဟာ ၆လက်မလောက် ရှိလာပါပြီ။ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေဟာ ကုန်းပေါ်မှာ အင်အားအကြီးဆုံး ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့ ကုန်းမြေတွေပေါ်ကို ဖြန့်ကျက်နေပါတော့တယ်။
နှစ်ပေါင်း သန်း ၆၀ လောက်အရောက်မှာတော့ အသီးတွေ ဟာ သစ်ပင်တွေပေါ်မှာ ပေါ်များလာပါပြီ။ အသီးအနှံတွေ ပိုစားလေလေ ကျနော်တို့ အသက်ပိုရှည်လာလေလေ ပါပဲ။ နောက်မျိုးစိပ်တွေ မှာတော့ သစ်ပင်ပေါ် နေလာကြပါတယ်။ ကမ္ဘာအသစ်ကြီးက ခန္ဓာကိုယ် အသစ်တွေ တောင်းဆိုနေပါတယ်။
နှစ်သန်းပေါင်း ၅၆ နှစ်
ကျနော်တို့ဟာ ပရိုင်းမိတ်တွေအဖြစ် ကမ္ဘာကြီးနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နေပါပြီ။ ကမ္ဘာကြီး နောက်တစ်ခါပြောင်းလဲပါဦးမယ်။ နှစ်ပေါင်း ဆယ်သန်းလောက်ကြာအောင် အပူချိန် အပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သစ်တောတွေ ပျက်ဆီးပြီး သေးငယ်လာတယ်။ အစာရှာဖို့ ခက်ခဲ လာကြတယ်။ သဘာဝတရားရဲ့ ရွေးချယ်မှု့က ဝင်ရောက် ကူညီရပြန်ပါပြီ။
ကျနော်တို့ရဲ့ ပထမဆုံး ပရိုင်းမိတ်တွေဟာ အမြီးတွေ မြီးညောှင့်ရိုးထိ တိုဝင်သွားကြတယ်။ သင်ပင်တွေအကြား ခုန်နေရာကနေ လက်ကိုအားပြုပြီး ဆွဲခို လာကြပြန်တယ်။ လက်တွေရှည်လာပြီး ပိုမိုပျော့ပြောင်း လာတယ်။ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု့တွေဟာ ကျနော်တို့ မျိုးစိတ်တွေကို ပြောင်းလဲမှု့ဖြစ်စေတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲမှု့ မပြီးသေးပါဘူး။
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်း ကျောက်လွာတွေ ရွေ့လျားနေပါတယ်။ အာဖရိကနဲ့ အာရေဘီယန် မြေလွာချပ်တို့ ဝေးကွာသွားပြိး သူတို့ကြားထဲကမြေနိမ့်ဆင်းသွားစေတယ်။ တစ်ဘက်စီမှာတော့ မိုင်ပေါင်း ၃၅၀၀လောက်ရှည်တဲ့ တောင်တန်းတခုစီ ဖြစ်ပေါ်စေပြန်တယ်။ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲကရေတွေ ဝင်ရောက်လာပြိး တောင်တန်းနှစ်ခု အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်။ အစားအစာတွေ ရှားပါးသွားပြီး ကျနော်တို့ အသက်ရှင်ဖို့ ခက်လာပြန်ပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၄့၄ သန်း
ဆဲလ်တစ်လုံး သက်ရှိကနေ ပရိုင်းမိတ်ဘဝအထိ ရှန်သန်အောင် အမျိုးမျိုး ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ ဟာ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲတခု စတင်ပြန်ပါပြီ။ နှစ်ပေါင်း သုံးသန်းလောက် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ဟာ လေးပေရှည်ပြီး ပေါင်၈၀ လောက်ရှိတဲ့ အာဒီပီးသီးကပ်စ် ရမီးဒပ်စ် ardipithecus ramidus ဘဝရောက်နေပြီး ဦးနောက်က လိမ္မော်သီးလောက်ရှိနေပါပြီ။
ကျနော်တို့ရဲ့ ထူထပ်တဲ့ မိုးသစ်တောတွေဟာ အခုဆို ဟိုတစ်ပျောက် ဒီတစ်ပျောက်နဲ့ ကျဲပါးလာတယ်။ သစ်ပင်ပေါ် အစာရှာနေတာကနေ စွန့်လွတ်ရပါတော့မယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ပထမဆုံး အနေနဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ် စရပ်ပြီး လမ်းလျောက်ပါပြီ။ လမ်းလျောက်ခြင်းကြောင့် မြေနိမ့် သစ်ပင်တွေဆီ ပိုရောက်နိုင်ပြိး သစ်ပင်မတက်ရတော့လို့ အားနေတဲ့ လက်တစ်စုံက အသီးတွေ ခူးလာနိုင်ပါတယ်။
အာဒီပီးသီးကပ်စ် တွေဟာ သင်ယူမှု့ လျှင်ပြန်ပါတယ်။ နောင် နှစ်ပေါင်း ၁.၂ သန်းကြာတဲ့အခါ ကျနော်တို့ဟာ ပိုဝေးဝေးသွားနိုင်လာပြိး ပိုမြန်မြန် လျောက်နိုင်လာကြတယ်။ နေစရာ၊ ကြင်ဖော်၊ စားစရာ ရှာဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူူလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ညှပ်ရိုးကျဉ်းလာတာမို့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးကလေးမွေးဖို့ရာတော့ ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးခေါင်းတွေသေးလာပြီး ကလေး အပြည့်အစုံ မဖွံ့ဖြိုးခင် မွေးလာကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ဟာ ကလေးတွေကို နှစ်အတန်ကြာ ချီပိုးထားရတဲ့ အနည်းငယ်သော မျိုးစိတ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ကို နို့တိုက်ရတယ် ကာကွယ်ထားရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃.၂ သန်း
သြစတြာလို ပီသီးကပ်စ် australopithecus afarensis ဖြစ်လာပါပြီ။
ဦးနှောက်က ရှောက်ပန်းသီးအရွယ် လောက်ရောက်လာပြီး အမြဲတမ်း ခြေထောက်နဲ့ပဲ လျောက်ပါတော့တယ်။ ခြင်္သေ့လို သားရဲတိစ္ဆာန်တွေ ရန်ကလွတ်ဖို့ အတွက် ကျနော်တို့ ဦးနှောက်ကို ပဲအသုံးပြုရပါတော့မယ်။ သဘာဝတရားကြီး က မေးရိုးကြွက်သားတွေကို သေးငယ်စေပြီး လွတ်သွားတဲ့နေရာမှာ ဦးနှောက်ကို ၂ဆ ကြီးမားစေပြီး အစွမ်းထက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၂့ ၃သန်း
ဒိအချိန်မှာ Handyman လို့ လူသိများတဲ့ homo habilis တွေကိုတွေ့နေရပါပြီ
ခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ လမ်းလျောက်ပြီး ကြီးမားတဲ့ ဦးနှောက်ရှိတဲ့ ပထမဆုံးလူသားပါ။ သူတို့ဟာ ကြီးမားသန်စွမ်းလာပြီး ပိုမိုဆာလောင်လာကြတယ်။ အမဲလိုက်စရာသားကောင်တွေရှိပေမယ့် ကိုယ်ကမစားရခင် သူတို့ကစားသွားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ဦးတည်း ခြေဦးတည့်ရာသွားလေ့ရှိပြီး လမ်းမှာတွေ့ရာ စားကြတယ်။ ဒီလိုသွားရင်လာရင်းနဲ့ပဲ ကျောက်တုံးကို လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုလို့ရမှန်း သိသွားကြပြန်တယ်။ ဒီလိုလက်နက်နဲ့ဆို ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် သန်းပေါင်း သုံးထောင်ကျော်ကစခဲ့တဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု့ဖြစ်စဉ် ပြီးတဲ့နောက် အခုဆိုရင် ကျနော်တို့ ကံကြမ္မာဟာ ကျနော်တို့ လက်ထဲကို ရောက်နေပါပြီ။ လက်နက်ကိရိယာကို တီထွင်နိုင်တာ ကျနော်တို့လူသားမျိုးစိတ်တွေပဲ ရှိတာပါ။ အခုချိန်လို ရန်သူပတ်လည်ဝိုင်းတဲ့ အခြေအနေမှာ ကျနော်တို့ ဟာ လက်နက်ကိရိယာကို အသုံးပြုပြီး သားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေကို တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အသီးအနှံစိုက်တဲ့နေရာမှာ လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လက်တွေဟာ သန်မာလာပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ဘောပင်တို့ ကော်ဖီခွက်တို့ ကိုင်နိုင်တာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂.၃ သန်းကျော်က လက်နက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု့ အကျိုးဆက်တွေပါ။
ကျနော်တို့ဟာ ဘိုးဘွားတွေ့ရဲ့ သမိုင်းကို သူတို့အရိုးစုတွေ အခြေခံပြီး တစ်စခြင်းပုံဖော်လေ့လာခဲ့ကြတယ်။ အရိုးစုတွေအများဟာ ပျောက်ဆုံးနေပြီး ကျနော်တို့ ရဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဆင်းသက်ပုံ ဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၁.၈ သန်း
ဒီအချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့ဟာ မျိုးစိတ်အသစ် ဟိုမို အီရပ်တပ်စ်ကို တွေ့နေရပါပြီ။
ဒီမျိုးစိတ်ကျတော့ စုပေါင်းအမဲလိုက်မုဆိုးတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ မျိုးစိတ်တူချင်း ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာ သိလာကြပြီ။ မမျော်လင့်ပဲ မီးကိုတွေ့ရှိရာကနေ အလင်း၊ နွေးထွေးမူ့နဲ့ အန္တရာယ်တွေက ကာကွယ်ပေးတာကို သိလာကြတယ်။ သဘာဝစွမ်းအားတွေ လူတွေ လက်ထဲရောက်လာပါပြီ။ အတူတကွပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လို့ အစားအစာတွေ ပိုရလာပြီး ပိုမိုအသက်ရှည်လာကြတယ်။ ဒါဟာ မိသားစုနဲ့ နေထိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ။ ဒီအလေ့အထဟာ အခုချိန်ထိအောင် ကျင့်သုံးနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးနဲ့ ချက်ပြုတ်စားသောက်ရင် အသားတွေဟာ ဝါးစားရပိုလွယ်တယ်ဆိုတာ သိလာကြတယ်။ ဒီကတစ်ဆင့် သိသာထင်ရှားတဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု့ဖြစ်စဉ်ကတော့ အခုခောတ် လူတွေရဲ့ ၃၅% ဟာ အံဆုံးပါမလာကြတော့ဘူး။ အစာကို ကြာကြာဝါးစရာမလိုတော့ ရှေးခောတ်လူတွေဟာ အားအင်တွေ ပိုလာတယ်။ ဦးနှောက်က အရင်ထက်စာရင် နှစ်ဆကြီးလာပြီး ဘောလုံး အသေးစားအရွယ်လောက်ထိ ရောက်လာတယ်။ မိသားစုထဲ လူတွေများလာတာနဲ့ အမျှ ဆက်သွယ်စကားပြောဖို့ လိုအပ်လာပါတော့တယ်။
သဘာဝရဲ့ ရွေးချယ်မှု့က ဝင်ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ လျှာဟာ ပုံသဏ္ဏန်ပြောင်းလာပြီး အောက်ကိုဆင်းသွားပါတယ်။ အသံအိုး ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး လူတွေ ပါးစပ်က အသံအမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ စကားလုံးတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲ သွားတယ်။ ဘာသာစကားဆိုတာ လူတွေအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၂ သိန်း
ဒီအချိန်မှာ အသိညဏ်ရှိတဲ့ လူတွေဖြစ်တဲ့ Homo Sapiens ဖြစ်လာပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းသုံးသောင်းမှာတော့ ကျနော်တို့ Homo Sapiens နဲ့ ခောတ်ပြိုင် မျိုးကွဲလူတွေ မျိုးတုန်းကုန်ပြီး Homo Sapiens တစ်မျိုးသာ ကျန်ပါတော့တယ် .... ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဦးနှောက်အကြီးဆုံး သတ္တဝါတွေဟာ ကျနော်တို့ ပါ။ လက်နက်တွေကိုင်တတ်တယ် စကားပြောတတ်တယ်၊ စဉ်းစားညဏ်ရှိပြီး ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ရှိသမျှနေရာတိုင်းကို ဖြန့်ကျက်သွားပါတော့တယ်။ စိန်ခေါ်မှု့အသစ်တွေ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တွေနဲ့ နေသားတကျဖြစ်အောင် နေထိုင်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို စိုးမိုးနိုင်တဲ့အထိပါပဲ။ သမိုင်းကိုနောက်ပြန်လည်ကြည့်ရင် ကျနော်တို့ရဲ့ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု့ဟာ နောက်တခါ ပြန်စမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေ သုညအဆင့်မှာပဲရှိပါတယ်။
Ref: where do humans come from by YAVAR ABBAS
Posted by ဦးလင္း at 19:57 No comments:
ဘာ့‌ကြောင့် လူသားတွေ ကမ္ဘာကို လွမ်းမိုးရသလဲ
(မစ္စတာ ဟာရာရီဟာ အစ္စရေးလူမျိုး သမိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဟီဗရူး ယူနီဗာစတီ သမိုင်းဌာနရဲ့ ပါမောက္ခ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူရေးခဲ့တဲ့ Sapiens: A Brief History of Humankind (2014), Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (2016) စာအုပ်တွေကိုဖတ်ဖို့ ဘေလ်ဂိတ်လို အိုဗားမားလို ကမ္ဘာကျော်တွေက တိုက်တွန်းခဲ့ကြတယ်)
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ခုနစ်သောင်းလောက်တုန်းက ကျနော်တို့ရဲ့ ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေဟာ ဘာမှစွမ်းဆောင်ရည် သိပ်မရှိသေးတဲ့ တိရိစ္ဆာန်သာသာ သတ္တဝါတွေပါ။ သမိုင်းမတိုင်ခင်ခောတ်က လူသားဆိုတာ ပင်လယ်ရေခူတွေ၊ ပိုးစုန်းကြူးတွေ၊ သစ်တောက်ငှက်တွေထက် ပိုပြီးအရေးမပါလှပါဘူး။ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ ကျနော်တို့ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ထိန်းချူပ်ထားပါတယ်။
မေးစရာတစ်ခုရှိတာက ကျနော်တို့ အဲ့ဒီဘဝကနေ လက်ရှိအခြေအနေထိရောက်အောင် ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာခဲ့တာလဲ? အာဖရိကရဲ့ ထောင့်တစ်နေရာက ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းလေးထဲမှာ မထင်မရှားနေ နေကြတဲ့ မျောက်ဝံသာသာ ဘဝကနေ ကမ္ဘာကြီးကို စိုးမိုးတဲ့အထိ ဘယ်လို ပြောင်းလဲလာကြသလဲ?
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ကျနော်တို့ဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲဆိုတာကို တစ်ဦးချင်း နိုင်းယဉ်ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ ဦးနောက် တွေက ခွေးတွေ၊ ဝက်တွေ၊ ချင်ပန်ဇီတွေထက် သာတယ်လို့ ယုံကြည်ချင်ကြတယ်။ အမှန်တရားကတော့ တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ချင်ပန်ဇီတွေထက် ဘာမှ သာမနေပါဘူး။ ကျနော်နဲ့ ချင်ပန်ဇီတစ်ကောင်ကို ကျွန်းတစ်ကျွန်းထဲမှာ ပစ်ထားကြည့်လိုက်ပါ။ ကျနော်တို့ဟာ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ ရုန်းကန်ကြရတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ပိုသာမယ်ထင်သလဲ?
အလောင်းအစားလုပ်ကြကြေးဆို ချင်ပန်ဇီဘက်ကပဲ ကျနော်လောင်းမှာပေါ့၊ ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်သေးလို့ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ထဲက ဘယ်သူမဆို စမ်းကြည့်လဲ ချင်ပန်ဇီက ပိုသာမှာပါပဲ။ လူနဲတိရိစ္ဆာန်တွေကြားမှာ အဓိကကွာခြားချက်က တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ စုပေါင်းစွမ်းရည်ကသာ ကွာခြားသွားတာပါ။ လူတွေ ကမ္ဘာကြီးကို ဘာလို့ စိုးမိုးနိုင်သလဲဆိုတော့ အရေအတွက်များများနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တာ လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါ တစ်မျိုးထဲရှိလို့ပါပဲ။
တစ်ခြားသတ္တဝါတွေဘက်ကို ကြည့်ရအောင်။ အစုအဖွဲ့နဲ့ နေထိုင်တဲ့ ပျားလို၊ ပုရွက်ဆိတ်လို အစုအဝေးနဲ့ နေထိုင်လေ့ရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေမှာ အရေးအတွက် များများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပေမယ့် လိုက်လျောညီထွေအောင်တော့ မလုပ်တတ်ကြဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဟာ အရမ်းတိကျတယ်။ ပျားတွေမှာ ပျားအုံတစ်ခုဖွဲ့ဖို့ဆို နည်းတစ်မျိုးပဲရှိတယ်။
အခွင့်အလမ်းပေါ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ခု အန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပျားတွေဟာ ပျားအုံဆောက်နည်း အသစ်တစ်ခု တီထွင်ဖို့ မလုပ်နိုင်ကြဘူး။ ဥပမာ ပျားဘုရင်မကို လုပ်ကြံလိုက်မယ်၊ ပျားသမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်ကြမယ်၊ ပျားလုပ်သားများ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထောင်ကြမယ် ဒါမျိုးတွေ မလုပ်နိုင်ကြဘူး။
တစ်ခြား နို့တိုက်သတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့ ဝံပုလွေ၊ ဆင်၊ လင်းပိုင် နဲ့ ချင်ပန်ဇီတို့ကို ကြည့်ရအောင်။ သူတို့ဟာ ပျားတွေထက် ပိုပြီး လိုက်လျောညီထွေ ပေါင်းသင်းနိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ အရေအတွက် နည်းနည်း ကိုပဲ ပေါင်းသင်းနိုင်ကြတယ်။ ချင်ပန်ဇီတွေ တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင်အကြားမှာဆိုရင် သူတို့အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှ ပေါင်းသင်းကြတယ်။
"ငါကချင်ပန်ဇီ မင်းကလဲချင်ပန်ဇီ ငါမင်းနဲ့တူတူ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ချင်တယ် မင်းအကြောင်းကို ငါသိရမှဖြစ်မယ် မင်းက ဘယ်လိုချင်ပန်ဇီမျိုးလဲ ? မင်းက ချင်ပန်ဇီကောင်း တစ်ကောင်လား ခပ်ဆိုးဆိုးထဲကလား? မင်းကယုံကြည်ရမဲ့ကောင်လား? မင်းကို ငါမသိရင်
ဘယ်လို ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရမလဲ ? " ဒီလိုတွေးလေ့ရှိတယ်။
ဒီလို အရေအတွက်များများနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တာ Homo Sapiens လို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ တစ်ကောင်ချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆယ်ကောင်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ချင်ပန်ဇီတွေက လူထက်ပိုသာနိုင်ကောင်း သာနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ထောင်နဲ့ ချင်ပန်ဇီ တစ်ထောင်စီ ယဉ်လာရင်တော့ လူတွေက အသာလေးအနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချင်ပန်ဇီ တစ်ထောင်ဟာ တူတူ ပူူးပေါင်းမဆောင်ရွက် နိုင်ပါဘူး။
အခု ချင်ပန်ဇီ တစ်သိန်း ကို အောက်စဖို့ဒ် လမ်းပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဝင်ဘလေကွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဗာတီကန်မာပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ်ထားကြည့်လိုက်ပါ။ တစ်ကယ့် ကို ဗရုသုက္ခ တော်တော်နိုင်မှာပါ။ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ ဝင်ဘလေကွင်းထဲမှာ ချင်ပန်ဇီ တစ်သိန်းဆိုတာကို ။ ရူးသွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခြားဘက်မှာတော့ လူတွေဟာ လူသောင်းနဲ့ချီပြီး အလွယ်တကူ စုဝေးနိုင်ကြတယ်။ ဘယ်တော့မှ ရုပ်ရုပ်ထွေးထွေးဖြစ်မသွားဘူး။ ကျနော်တို့ဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှူ့ အလေ့အထကို ကျင့်သားရပြီးသားပါ။
သမိုင်းတစ်လျောက် လူသားတွေ အောင်မြင်မှု့ က ပိရမစ်ကြီးတွေ ဆောက်နိုင်တာ၊ လကမ္ဘာပေါ် သွားနိုင်တာ တွေပါ။ ဒါတွေက တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ အရေအတွက်များများနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း အကျိုးကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျနော် စကားပြောနေတဲ့ပွဲကိုပဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ အခုနားထောင်နေတဲ့သူ ၃၀၀ကျော် ၄၀၀ကျော် ရှေ့မှာ ကျနော်စကားပြောနေတယ်။ ခင်ဗျားတို့အားလုံး ကျနော်နဲ့သိခဲ့ဘူးတဲ့လူ တစ်ယောက်မှ မပါပါဘူး။
အဲ့လိုပဲ ဒီပွဲစီစဉ်သူတွေ အလုပ်သမားတွေကို လဲ တစ်ယောက်မှ မသိခဲ့ပါဘူး။
ကျနော်ဒီလန်ဒန်ကို အလာ စီးခဲ့တဲ့ လေယာဉ်မှူး နဲ့ လေယာဉ် ဝန်ထမ်းတွေကိုလဲ တစ်ယောက်မှ မသိခဲ့ဘူး။ ကျနော်အခု စကားပြောနေတဲ့ မိုက်ခရိုဖုန်း ကင်မရာတွေတီထွင်ခဲ့တဲ့ သူတွေကိုလဲ မသိခဲ့ဘူး။ ဒီပွဲမှာ ပြောဖို့ ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ ရေးခဲ့သူတွေကိုလဲ မသိခဲ့ဘူး။ သေချာတာက အခုပွဲကို အင်တာနက်ကကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလဲ ကျနော်မသိပါဘူး။
ကျနော်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မသိကြပေမယ့်၊ အခုလိုအတွေးအခေါ်တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ မျှဝေ နိုင်ကြတယ်။ ဒါတွေဟာ ချင်ပန်ဇီတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ အရာပဲ။ ဟုတ်ပါတယ် သူတို့ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှု့ ဆိုတာရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ချင်ပန်ဇီတစ်ကောင်က တစ်ခြားချင်ပန်ဇီအုပ်စုတစ်စုဆီသွားပြီး ငှက်ပျောသီးအကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဆင်အကြောင်း ဟောပြောဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
ပူူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတာ အမြဲ ကောင်းတဲ့ အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတွေသမိုင်းတစ်လျောက်မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ကြီးကြီးမားမား အမှားတွေကလဲ ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှူ့ကနေ စခဲ့တာပါပဲ။ ထောင်တွေ၊ လူသတ်စင်တွေ၊ အကျဉ်းစခန်းတွေဆိုတာ အဲ့ဒီကနေ ဖြစ်လာတာပါ။ ချင်ပန်ဇီတွေမှာတော့ ထောင်တွေ၊ လူသတ်စင်တွေ၊ အကျဉ်းစခန်းတွေဆိုတာ မရှိကြဘူး။
ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်ရင် အခုလို ကျနော်တို့ ကမ္ဘာကြီးကို စိုးမိုးနိုင်တာဟာ အရေအတွက်များများနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လို့ပါပဲ။ ဒါဆိုရင် နားထောင်နေတဲ့သူတွေစိတ်ထဲမှာ မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်နိုင်တာက "ငါတို့ဘာလို့ ဒီလောက်တိတိကျျကျ လုပ်နိုင်ကြသလဲ?
ဒီလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဘာတွေက တွန်းအားပေးခဲ့တာလဲ?"
အဖြေကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ စိတ်ကူးညဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ မရေတွက်နိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါတစ်ခုပဲ စိတ်ကူးယဉ်ဇတ်လမ်းတွေ တီထွင်ပြိး ယုံကြည်နိုင်ကြလို့ပါပဲ။ လူတွေအားလုံး ဒီလို ထွင်လုံးတွေကို ယုံကြည်နေသမျှ၊ လူတွေအားလုံး ဒီဥပဒေတွေ၊ စံသက်မှက်ချက်တွေကို နာခံကြပြီး လိုက်နာကြမှာပဲ။
ကျန်တဲ့ သတ္တဝါတွေကတော့ အရှိတရားကိုပဲလက်ခံကြပြီး တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် အဆက်အသွယ်ပြုကြတယ်။ ချင်ပန်ဇီတစ်ကောင်က " ကြည့်စမ်း ဟိုမှာ ခြင်္သေ့တစ်ကောင် ပြေးကြစို့"
" ကြည့်စမ်း ဟိုမှာ ငှက်ပျော်ပင်တွေ သွားစားကြစို့"လို့ မြင်တာကိုပဲ ပြောနိုင်တယ်။
လူတွေအနေနဲ့ကတော့ ဘာသာစကားကို အဲ့လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာနည်းတယ်။ များသောအားဖြင့် ဇတ်လမ်းတွေထွင်ပြိးပြောတတ် ကြတယ်။ ဥပမာ "ကြည့်စမ်း တိမ်တွေအထက်မှာ ဘုရားရှိတယ်၊ မင်းငါပြောတာမလုပ်ဘူးဆိုရင် မင်းသေတဲ့အခါ ဘုရားက ငရဲကိုပို့ပြီး အပစ်ပေးလိမ့်မယ်"
အားလုံးကအဲ့ဒီပုံပြင်ကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် စံသက်မှက်ချက်၊ ဥပဒေ၊ လူ့တန်ဘိုးတွေ ဖြစ်သွားပြီး လူတွေအားလုံးက လိုက်နာကြရလိမ့်မယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခု တည်းပဲလုပ်နိုင်တာပါ။
ခင်ဗျားတို့ ဘယ်တော့မှ ချင်ပန်ဇီတစ်ကောင်ကို "မင်းငှက်ပျောသီးငါ့ကိုပေး၊ ဒီလို ပေးရတဲ့အကျိုးအတွက် မင်းသေတဲ့အခါ နတ်ပြည်ရောက်လိမ့်မယ် အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာ ငှက်ပျောသီးတွေ မင်းအများကြီးစားရလိမ့်မယ် " လို့ သိမ်းသွင်းလို့မရဘူး။ ဘယ်ချင်ပန်ဇီကမှ အဲ့လိုပုံပြင်မျိုး ယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါမျိုးကို လူသားတွေပဲ ယုံကြတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ လူသားတွေ ကမ္ဘာကြိးကို စိုးမိုးနေပြီး ချင်ပန်ဇီတွေကတော့ တိရိစ္ဆာန်ရုံတွေမှာ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာ ထိမ်းသိမ်းခံနေရတာဖြစ်တယ်။
လူသားတွေဟာ ဘာသာတရားတစ်ခုမှာ အတူတကွယုံကြည်ကြပြီဆိုရင် လူတွေသိန်းသန်းချီ စုဝေးလာပြီး ဘုရားကျောင်းတွေ ဆောက်ကြမယ်၊ ဗလီတွေ ဆောက်ကြမယ်၊ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြမယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘုရားတွေ၊ ငရဲတွေ၊ နတ်ပြည်တွေ ကိုတစ်စုတစ်ဝေးတည်း ယုံကြည်ကြပြီး အဲ့ဒီဘာသာရေးတိုးပွားအောင်လို့ လုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ အထူးပြောချင်တာက ဒီလိုပုံစံမျိုး အတူတူတွေကို ဘာသာတရားတင်မကတော့ပဲ တစ်ခြား စနစ်တွေမှာပါ ထည့်သွင်းလာတယ်။ ဥပဒေဘက်ကိုကြည့်မလား ? အခုရှိသမျှ ဥပဒေတော်တော်များများဟာ လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေခံထားတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲ? လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာလဲ ဘုရားတွေ ငရဲတွေလိုပဲ လူတွေက ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို မမြင်တွေ့နိုင်ဘူး။ သူတို့ကြောင့် လူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့ ဇီဝဖွဲ့စည်းပုံ ပြောင်းလဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။
လူတစ်ယောက်ကိုယူ၊ သူ့ရင်ကိုခွဲကြည့်လိုက်၊ နှလုံးတွေ၊ အသည်းတွေ၊ နူရွန်တွေ၊ DNA တွေကို တွေ့ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လူ့အခွင့်အရေးမှ တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း လူတွေတီထွင်ထားပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ဝေထားတဲ့ ပုံပြင်တွေထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ ပုံပြင်တွေက ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းချင်ကောင်းလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ ပုံပြင်တစ်ခုပါပဲ။
နိုင်ငံရေးဘက်ကိုကြည့်ရအောင်၊ လက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာ လူတွေတီထွင်ထားတဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်က တိုင်းပြည်တွေ နိုင်ငံတွေပါ။ တိုင်းပြည်တွေ နိုင်ငံတွေဆိုတာဘာလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
သူတို့ဟာ တကယ်တော့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြလို့မရပါဘူး။ လူတွေတီထွင်ထားတဲ့ စိတ်ကူးသက်သက်ပါ။ နောက်တော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ယုံကြည်စွဲလန်းသွားတဲ့အထဲမှာ တိုင်းပြည် နိုင်ငံဆိုတာလဲပါတယ်။
စီးပွားရေးဘက်မှာရော၊ အခုစီးပွားရေးမှာ အဓိကကျတာက ကုမ္မဏီတွေ လုပ်ငန်းတွေပါ။ ခင်ဗျားတို့တော်တော်များများ Googleလို Mc Donaldလို Toyota လို ကုမ္မဏီတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကြမှာပဲ။ ဒီဟာတွေက ဘာတွေလဲ? ရှေ့နေတွေခေါ်ကြတာတော့ တရားဝင် ထွင်လုံးတွေပါတဲ့။
ဒီလို ကုမ္မဏီတွေ လုပ်ငန်းတွေဟာ လက်ဆိုင်လက်ကိုင်ပြလို့မရပါဘူး။
သူတို့ဟာ ထွင်လုံးတွေ ဖန်တီးကြတယ်၊ ပြီးတော့ ရှေ့နေဆိုတဲ့ မှော်ဆရာလိုလို အကောင်တွေကြောင့် လူတွေကို အစဉ်အဆက် ယုံကြည်စေတယ်။
ဒီနေ့မှာ ကုမ္မဏီတွေ လုပ်ငန်းတွေဟာ ဘာတွေလုပ်နေကြလဲသိလား? သူတို့ ပိုက်ဆံရှာနေကြတာ။ ပိုက်ဆံဆိုတာဘာလဲ? လာပြန်ပါပြီ၊ ပိုက်ဆံဆိုတာတကယ်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ဇတ်လမ်းသက်သက်ပါ။ ဒီပိုက်ဆံဆိုတဲ့ စက္ကူတစ်ရွက်ကိုယူပြီး ကြည့်လိုက်စမ်းပါ၊ သူ့မှာဘာတန်ဘိုးမှ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကို ခင်ဗျားတို့ စားလို့ မရဘူး၊ သောက်လို့လဲမရဘူး၊ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဆင်လို့လဲမရဘူး။ ဒီနေရာမှာ ပုံပြောကောင်းတဲ့ ဆရာကြီးတွေဝင်ပါလာပြီ။
ဘဏ်လုပ်ငန်းကြီးတွေ၊ ဘဏ္ဏာရေးဝန်ကြီးတွေ နဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်နဲ့ စပြီး နှစ်သိမ့်ပါတော့မယ်။ "ဒီစက္ကူကို ကြည့်စမ်း ဒီစက္ကူက ငှက်ပျောသီး ဆယ်လုံးနဲ့ညီတယ်" ။ ဒါကို ကျနော်ကယုံတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ကလဲယုံတယ် လူတွေအားလုံးကယုံတယ်ဆိုရင် အလုပ်ဖြစ်ပါပြီ။ ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့ ဒီစက္ကူကိုယူပြီး ဈေးဆိုင်ကိုသွား၊ တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ ဈေးသည်ဆီမှာ ငှက်ပျောသီးဆယ်လုံးနဲ့လဲ၊ ခင်ဗျားတို့ တစ်ကယ်စားလို့ရပါပြီ။ ဒါဟာ တစ်ကယ်တော့ တော်တော်အံသြစရာ ကောင်းပါတယ်။
ဒါကို ချင်ပန်ဇီတွေ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ချင်ပန်ဇီတွေလဲ ကုန်စည်ဖလှယ်ကြတာပါပဲ။ "မင်းငါ့ကို ငှက်ပျောသီးပေးရင် ငါမင်းကို အုန်းသီးပေးမယ်" ဒီလောက်ပဲရမယ်။ ချင်ပန်ဇီတစ်ကောင်ကို စက္ကူတစ်ရွက်ပေးပြီး ငှက်ပျော်သီးလိုချင်လို့ကတော့ ဘယ်ရမလဲ "လဲသေလိုက်လေ ငါ့များ လူတွေလို
"အ"တယ် ထင်နေသလား" လို့ပြောမှာပေါ့။
ပိုက်ဆံဆိုတာ လူတွေ ဖန်တီးသမျှပုံပြင်တွေထဲမှာ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့ ပုံပြင်တွေထဲမှာ ဘုရားတို့၊ အမျိုးသားရေးတို့၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့ဆိုတာ လူတိုင်းက ယုံကြည်မနေပါဘူး။ လူတိုင်းက ပိုက်ဆံဆိုတဲ့ ပုံပြင်မှာတော့ အကုန်ယုံကြည်ကြတယ်။ အိုဆာမာ ဘင်လာဒင်ကိုကြည့်ပါ၊ သူက အမေရိကန် နိုင်ငံရေးစနစ်၊ ဘာသာရေးစနစ်၊ ယဉ်ကျေးမူ့တွေကို အကုန်မုန်းပါတယ်။ အမေရိကန် ဒေါ်လာကိုတော့ သူကြိုက်ပါတယ်။ ကြိုက်တာမှ တော်တော်ကို ကြိုက်တာပါ။
ဒီကနေ အဖြေထုတ်ရရင်၊ လူတွေဘာလို့ ကမ္ဘာကြီးကို လွမ်းမိုးနေလဲဆိုတော့၊ ကျနော်တို့ဟာ စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာရော၊ လက်တွေ့ကမ္ဘာ နှစ်ခုကို ပြိုင်တူနေနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားသတ္တဝါတွေကတော့ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ ကမ္ဘာမှာပဲ နေထိုင်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကမ္ဘာဆိုတာ မျက်စိနဲ့ မြင်ရတဲ့ မြစ်တွေ၊ တောင်တွေ၊ သစ်ပင်တွေ၊ ခြင်္သေ့တွေနဲ့ ဆင်တွေ လိုအရာတွေမှာ ဖြစ်တည်ပါတယ်။ လူတွေလဲ အတူတူပါပဲ အဲ့လို လက်တွေ့ကမ္ဘာမှာ နေထိုင်ရင်း နောက်ထပ် စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာတစ်ခု ဖြေးဖြေးချင်း တည်ဆောက်လာခဲ့တယ်။
နိုင်ငံတွေ၊ ဘုရားတွေ၊ ပိုက်ဆံတွေ၊ ကုမ္မဏီတွေ နဲ့ လုပ်ငန်းတွေလိုမျိုး တစ်ဖြေးဖြေးချင်း ဖန်တီးလာကြတယ်။ အံသြစရာကောင်းတာက ဒီလို ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေက လက်တွေ့ကမ္ဘာ ထက်ပိုပြီး စွမ်းရည်တန်ခိုးပိုမြင့်လာတယ်။ ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ လူတွေအတွက် တန်ခိုးကြီးတဲ့ အရာက လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ ဇတ်လမ်းတွေပဲ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကမ္ဘာဖြစ်တဲ့ မြစ်တွေ၊ တောအုပ်တွေ၊ တောင်တွေ သတ္တဝါတွေရဲ့ အနာဂါတ်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာက ဆုံးဖြတ်ချက် တွေဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံလို ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်လို ဟာတွေအပေါ် အများကြီး မူတည်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by ဦးလင္း at 20:17 1 comment:
British Rock အဖွဲ့ Queenရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော် ဖရက်ဒီမာကျူရီဟာ Bohemian Rhapsody ဆိုတဲ့ သီချင်းကို စတင်ရေးသားခဲ့တုန်းက country သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်ရေးခဲ့တာပါ။ သီချင်းခေါင်းစဉ်ကလဲ Real Life ပါတဲ့။
ကံကောင်းချင်တော့ အပေါ်ကစာသားတွေဟာ Cowboy သီချင်းအဖြစ်နဲ့အဆုံးသတ်မသွားဘဲ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အခုဆိုရင် ဒီသီချင်းဟာ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ကျော် ကြာခဲ့ပြီး ခုထိကျော်ကြား နေတုန်းပါပဲ။
ဒီသီချင်းဟာ သာမန်သီချင်းတစ်ပုဒ်လို Verse,Chorus, Bridge နဲ့ ပြီးမသွားပါဘူး။
ဂီတအမျိုးအစား တစ်ခုတည်းရေးစပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ A cappella, Ballad, Opera, Progressive Rock, Hard Rock တို့လို ဂီတအမျိုးအစားအများကြီးကို တစ်ပေါင်းတည်းရေးစပ်ထားတာပါ။ Bohemian Rhapsody သီချင်းကို ပထမဆုံး စနားထောင်တဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက် တစ်ခြားသီချင်းတွေနဲ့ သိသိသာသာ ကွဲထွက်နေမှန်း သိသာပါတယ်။
ဖရက်ဒီဟာ ဒီသီချင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ဘယ်သူ့မှ ပြောပြမသွားခဲ့ဘူး။
ဖရက်ဒီရဲ့ အထ္တုပတ္တိရေးတဲ့ လက်စလီ အန်းဂျုန်းကတော့ ဒီစာသားတွေဟာ လူတစ်ယောက်ကို သတ်မိတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက် အကြောင်း ရေးထားတာ မဟုတ်ဘဲ ဖရက်ဒီတစ်ယောက် ယောင်္ကျားလေးဘဝကို အဆုံးသတ်ပြီး ဂေးတစ်ယောက်အဖြစ်ရှင်သန်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတဲ့အကြောင်း ရေးထားတာလို့ ယူဆတယ်။
”Mama, ooh, didn't mean to make you cry
အပေါ်က Mama ဆိုတာ သူ့အမေကိုဆိုလိုတာ မဟုတ်ပဲ ၇နှစ်လောက် လက်တွဲခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူ မေရီအော်စတင်ကို ဆိုလိုတာပါတဲ့။ မေရီနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး Love of my life, Take my breath away တို့လို သီချင်းတွေလဲ ရေးစပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဖရက်ဒီနဲ့ သူ့ချစ်သူ မေရီအော်စတင်ဟာ အချိန်အကြာကြီး တွဲခဲ့ပြီးမှ ဖရက်ဒီတစ်ယောက် Elektra Records ကလူတစ်ယောက်နဲ့ လိင်တူချင်းချစ်ကြိုက်ခဲ့လို့ သူတို့ဇတ်လမ်း အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖရက်ဒီကတော့ မေရီသာ တရားဝင်မယားဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းလို့ ဆိုတယ်။
”Too late, my time has come
I sometimes wish I'd never been born at all”
ငါလူဖြစ် မလာရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲတဲ့လား။ ဖရက်ဒီဟာ အပြင်ပန်းမှာ ပျော်ပျော်နေတတ် စင်ပေါ်မှာဆို ဟိတ်ဟန်ကြီးသလောက် နောက်ကွယ်မှာတော့ အမြဲအားငယ်နေတတ်သူ အထီးကျန်သူတစ်ယောက်ပါ။ လူတွေက သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားတာတွေ ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တာတွေကြောင့် ဝန်းရံနေကြပေမယ့် သူ့ကိုတစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာ သူသိလာပါတယ်။
Opera နဲ့စတဲ့ ဒီအပိုဒ်မှာတော့ Scaramouche တစ်ယောက်ကို Fandango ကခိုင်းသလို သူ့ဘဝအသစ်ကို သွားဖို့ ကြောက်ရွံ့ နေပုံနဲ့ တင်စားသွားပါတယ်။ နောက်အယူအဆတစ်ခုကတော့ Scaramouche ဆိုတာ ဖရက်ဒီ၊ Galileo ဆိုတာက astro physicist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘရိုင်ယန်မေ၊ Beelzebub ကတော့ ရော်ဂျာတေလာ နဲ့ Figaro က ဂျွန်ဒေကွန် ကိုရည်ညွန်းပါတယ်တဲ့။
ဒီနေရာမှာ အသံပံပိုးမူ့အကောင်းဆုံးကတော့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ဒရမ်မာဖြစ်သူ တေလာပါ သူဟာ high note တွေတော်တော်မြင့်တဲ့အထိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
”But I'm justapoor boy, nobody loves me
Easy come, easy go, will you let me go? ”
“ ငါဟာ သနားစရာ သတ္တဝါတစ်ကောင်ပါ
မမြဲတဲ့ နေ့မြင်ညပျောက်လောကကြီးမှာ ငါ့ရဲ့ဘဝဟောင်းကို စွန့်ခွာခွင့် မရှိရဘူးတဲ့လား”
”Bismillah! No, we will not let you go
Bismillah ဆိုတာ အာရပ်စကားအရ ဘုရားသခင် နာမတော်အားဖြင့်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်
သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ကိုယ်စောင့်နတ်နဲ့နတ်ဆိုးတို့ လွန်ဆွဲနေပုံကို ရေးဖွဲ့ထားတာပါ
“အရင်ခောတ် ကလို ငါ့ကို တံတွေးထွေးပြီး ကျောက်တုံးနဲ့ပေါက်သတ်တော့မလို့လား
ဒီဆိုလိုအပိုဒ်မှာ လိဒ်ဂစ်တာသမလား ဘရိုင်ယန်မေရဲ့ သေသပ်တဲ့ လက်ရာကို သေသေချာချာ တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး solo တွေထဲက တစ်ပုဒ်ကို စတီးပါပြီ။ တကယ်တော့ ဒီဂစ်တာဆိုလိုကိုလဲ ဘရိုင်ယန်မေ ရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖရက်ဒီကပဲ ရေးခဲ့တာပါ။
လိဒ်ဂစ်တာသမား ဘရိုင်ယန်မေဟာ Astrophysics နဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ရထားတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ ဂစ်တာတီးရင် Plectrum မသုံးပဲ ပြားစေ့နဲ့ တီးလေ့ရှိတယ်။
Bohemian Rhapsody ဆိုတဲ့ သီချင်းခေါင်းစဉ်အဓိပ္ပါယ်ကို ဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိကြပါဘူး ဒါပေမယ့် ဖရက်ဒီတစ်ယောက် ဒီသီချင်းထဲမှာ သူ့ဘဝတစ်ခုလုံး ထည့်သွင်းရေးဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။
ဖရက်ဒီမာကျူရီဟာ သူ့မှာ AIDS ရောဂါခံစားနေရပါပြီလို့ ကမ္ဘာကို တရားဝင်ကြေငြာပြီး နောက်တစ်ရက် (၁၄ နိုဝင်ဘာ ၁၉၉၁ ) မှာ AIDS ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါဖြစ်တဲ့ အဆုပ်ရောင်ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
2006 ခုနှစ်မှာ Time မဂ္ဂဇင်းက ဖရက်ဒီကို နှစ်ပေါင်း(၆၀) အတွင်း အအောင်မြင်ဆုံး အာရှနွယ်ဖွား တစ်ယောက်အဖြစ် သက်မှက်ခဲ့တယ်။
Posted by ဦးလင္း at 05:08 No comments:
နယူးရောက်မြို့တော် အကျယ်အဝန်းလောက်ရှိတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာ လူဦးရေ လေးသန်းကျော် နေထိုင်ပါတယ်။ ဒီအင်္ဂလိပ် စကားပြော နိုင်ငံငယ်လေးဟာ နိုင်ငံတကာကလူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝ ဖန်တီးဖို့ရာ အခွင့်အလမ်းတွေ အပြည့်ပါပဲ။ စင်ကာပူရဲ့ မြေပြင် အထက်နဲ့အောက် နယ်ပယ်သိမ်းပိုက်မူ့ဟာ ရင်သပ်ရှူ့မောစရာကောင်းလှပါတယ်။
မြေနေရာ အကန့်အသက်သာရှိတဲ့ စင်ကာပူရဲ့ မြို့လယ်ခေါင်မှာတော့ နေရာပြုန်းတီးမူ့ မရှိရလေအောင် မိုးမျော်တိုက်ကြီးတွေ အများအပြားနဲ့ မြင့်မြင့်မားမား တည်ဆောက်ထားတယ်။ မြေအောက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လည်း အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ ဥမင် လှိုင်ခေါင်း အသွယ်သွယ်နဲ့ ရထားလမ်းတွေ ဖောက်လုပ်နေကြပါတယ်။ ဒီရထားလမ်းတွေဟာ မြို့လယ်ခေါင် အဓိကကျတဲ့ နေရာတွေကနေ လူဦးရေသိပ်မထူထပ်တဲ့ အခြားလူနေရပ်ကွက်တွေစီ နေ့စဉ် ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။
ဒီလို လူဦးရေ သိပ်မထူထပ်တဲ့ နေရာတစ်ခုကတော့ Little India ပါ။ မြို့လယ်ခေါင်ကနေ (6 Km) ကွာဝေးပြီး စီးပွားရေး တရှိန်ထိုး တိုးတက်နေတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံအလုပ်သမား အများစုနေထိုင်တဲ့(အဲ့ဒီအချိန်က) နေရာဖြစ်တယ်။
Little India က Owen Road နဲ့ Upper Serangoon Road ဆုံတဲ့ နေရာမှာတော့ (၁၉၇၁) ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ထားတဲ့ Hotel New World အဆောက်အဦး တည်ရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်ကို အာစီကွန်ကရစ်တိုင် (၃၆)တိုင်ပေါ် အခြေခံတည်ဆောက်ထားပြီး အထပ်(၆)ထပ် မြင့်တယ်။ မြေအောက်ခန်းမှာတော့ ကားရပ်နားစရာနေရာ၊ မြေညီထပ်က ဘဏ်ရုံးခန်းတစ်ခု ။
ကျန်တဲ့အထပ်တွေကို အလယ်အလတ်တန်းစား တည်းခိုခန်းနဲ့ နိုက်ကလပ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားတယ်။ စင်ကာပူ အဆောက်အဦး တော်တော်များများရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ေခေါင်မိုးပေါ်မှာ အဲကွန်းအကြီးစားဖြစ်တဲ့ Chiller နဲ့ ရေပေးကန် ရှိနေပါတယ်။
ဟိုတယ်ဖွင့်ပြီးလို့ လေးနှစ်အကြာမှာ ဓါတ်ငွေ့ယိုစိမ့်ပြီး လူ(၃၅)ယောက်ကို ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီး တစ်ယောက်မှ အထိအခိုက်မရှိခဲ့ပါဘူး။
နောက်ထပ် (၁၁)နှစ်အကြာ (၁၉၈၆) မတ်လ(၁၄)ရက်နေ့
အဲ့ဒီနေ့ကသောကြာနေ့ပါ.။ နိုက်ကလပ်က စားပွဲထိုး လီလီတေလာ တစ်ယောက် ညနေအတွက် ပြင်ဆင်ရင်း အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်။
ရုတ်တရက် ကပွဲခန်းမက ကွန်ကရစ်တိုင် တစ်တိုင်ဟာ ရုတ်တရက် ကွဲအက်သွားတယ်။ သူမဟာ ချက်ချင်းဆိုသလို အဆောက်အဦးပိုင်ရှင်ဆီ အကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ နိုက်ကလပ် စဖွင့်ပါပြီ။ သိပ်မကြာခင် အလုပ်သမားတစ်ချို့ ရောက်လာပြီး အက်ကွဲကြောင်းတွေကို ဖာထေးပြုပြင်ခဲ့ပြန်တယ်။ နိုက်ကလပ်ကလူတွေဟာ အလုပ်သမားတွေကို သိပ်သတိမထားမိကြဘဲ ဆက်လက်ကခုန်နေတယ်။
ကပွဲခန်းမထဲမှာ လူတွေပြည့်နေပါပြီ။ အလှပြင်ခန်းထဲမှာတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ မှန်တင်ခုံရှေ့မှာ အလှပြင်နေတယ်။ ရုတ်တရက်ပဲ မှန်တင်ခုံရှေ့က မှန်ဟာ ကွဲအတ်သွားပါတယ်။ စင်ကာပူ နိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများဟာ တခြားနိုင်ငံတွေလိုပဲ မှန်ကွဲတာ ကံမကောင်းဘူးလို့ ယုံကြည်လေ့ရှိတယ်။ ကပွဲခန်းမကလူတွေကတော့ ရုံးပိတ်ရက်စပြီဖြစ်လို့ ပျော်ရွင်စွာကခုန် နေကြတာပါ။ ဒီအဆောက်အဦးမှာ ပြဿနာရှိနေပြီဆိုတာ ဂရုမစိုက်နိုင်ကြသေးပါဘူး။
မတ်လ (၁၅)ရက် (၈)နာရီ
ချောင်ချန်ဂွမ်း ဟာ မြေညီထပ်မှာရှိတဲ့ ဘဏ်က လက်ထောက်မန်နေဂျာ တစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ မကြာသေးခင်ကမှ လက်ထပ်ထားတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ အတူ ပန်းခြံငယ်လေးကိုဖြတ်ပြီး ဘဏ်ရှိရာလျောက်လာနေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ များမကြာခင်မှာ သြစတြေးလျားနဲ့ နယူးဇီလန်ကို ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ဖို့ စီစဉ်ထားကြတယ်။ ဘဏ်နားရောက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲခဲ့ပြီး ညနေပြန်ဆုံကြဖို့ပြောရင်း နုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ချောင်ချန်ဂွမ်း တို့ဘဏ်မှာ ဝန်ထမ်း(၁၇) ယောက်ရှိတယ်။ သူတို့ဟာ မိသားစုတွေလို အသင်းအဖွဲ့လို တက်ညီလက်ညီ ရှိလှတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ အသက်(၂၁)နှစ်အရွယ် ခရစ္စတီးနား တစ်ယောက်လဲ အပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ ဒီဘဏ်ကိုသူရောက် လာတာ သုံးလလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူကအပေါ်ထပ်မှာရှိတဲ့ နိုက်ကလပ်ကို မရောက်ဖူးပါဘူး။ သူမထိုင်တဲ့နေရာဟာ မနေ့ညက ကပွဲခန်းမမှာ အက်ကွဲနေတဲ့ ကွန်ကရစ်တိုင်ရဲ့ ဘေးမှာဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။
နံနက် (၁၀း၁၀) နာရီ
ဘဏ်ကိုလာတဲ့ သူတစ်ယောက်က အမောတကောပြေးလာပြီး ဘဏ်ပြိုကျတော့မယ်လို့ မန်နေဂျာဆီ လာပြောတယ်။ ချောင်နဲ့ ခရစ္စတီးနားတို့ အပြေးအလွားဆင်းကြည့်တဲ့အခါ ကွဲအက်နေတဲ့ တိုင်ကို ပြုပြင်နေတဲ့ အလုပ်သမားနှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူတို့က ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး စိတ်အေးအေးထားပါ ဆိုတာနဲ့ သူတို့လဲ အပေါ်ပြန်တက်လာတယ်။
သူတို့ရဲ့ အပေါ်ထပ်က ဟိုတယ်ဧည့်ကြိုဌာနမှာတော့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ ကွန်ကရစ်တိုင်တွေ အက်ကွဲလာပြီး အက်ကြောင်းရာတွေ ကြီးသထက်ကြီးလာတယ်။ မြေညီထပ်က ဘဏ်မှာရှိတဲ့ ချောင်နဲ့ ခရစ္စတီးနားတို့ဟာ နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ ပြသနာတွေကို မသိတော့ပါဘူး။ အပေါ်ထပ်မှာတော့ အဆောက်အဦးကို ထောက်ပံ့ထားတဲ့ ကွန်ကရစ်တိုင်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်း အက်ကွဲလာပါပြီ။ Hotel New World အဆောက်အဦး တစ်ခုလုံးပြိုကျပါတော့မယ်။
လက်ထောက်မန်နေဂျာ ချောင်ဟာ သူ့ဇနီး စာမေးပွဲဖြေနိုင်ရဲ့လားလို့ တွေးတောနေပါတယ်။ ခရစ္စတီးနားဟာ သူမအလုပ်တွေကို လတ်စသတ်နေတုန်းမှာပဲ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အသံတစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်။ အဆောက်အဦးအပိုင်းအစတွေ ပြုတ်ကျလာတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူမ မသိသေးပါ။ ချက်ချင်းဆိုသလို အဆောက်အဦး တုန်ခါလာတာကို ခံစားသိရှိလိုက်တယ်။
အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံး သွက်သွက်ခါအောင် တုန်လှုပ်နေပြီး အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံး ကွဲအက်ပြီး တစ်စစီပြိုကျခဲ့ပါတယ်။ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာပဲ Hotel New World ဟာ ကွန်ကရစ်ပုံကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ကွန်ကရစ်တန်ချိန် ထောင်ပေါင်းများစွာကြားမှာ အဆောက်အဦးထဲကလူတွေ ပိတ်မိကုန်ပါပြီ။
ချောင်၊ ခရစ္စတီးနားနဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ချို့ဟာ ကားရပ်နားတဲ့ မြေအောက်ခန်းထဲကို ပြိုဆင်းသွားကြတာပါ။ သူတို့ဟာ ပထမတော့ ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။ ဘာသံမှလဲမကြားရတော့ဘူး။ ကွန်ကရစ်ပုံ အပျက်အစီးကြီးက ပိနေတဲ့အတွက် လှူပ်လဲမလှူပ်နိုင်ကြတော့ဘူး။
မြေပြင်ပေါ်မှာတော့ အနီးအနားဝန်းကျင်ကလူတွေဟာ အပျက်အစီးပုံကိုလူအားနဲ့ ဖယ်ရှားရင်း အသက်ရှင်သူတွေ့လိုတွေ့ငှား ကြိုးစားရှာဖွေနေကြတယ်။ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ တစ်ယောက်မှ မတွေ့ကြပါဘူး။ ရှစ်မိနစ်အကြာမှာ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ရောက်လာပါပြီ။ ဒီအဖြစ်အပျက်သတင်းဟာ သက်ဆိုင်သူတွေရဲ့ ဆွေမျိုးတွေဆီ ရောက်သွားပြီး အနီးအနားမှာ ရပ်ကြည့်ပူဆွေးနေရုံပဲ တတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ချောင်ချန်ဂွမ်းရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူဟာ သတင်းကြားကြားချင်း အပြေးလာရောက်ခဲ့တယ်။ သူမခင်ပွန်း ဘယ်နေရာမှာဆိုတာ သူမလဲ မခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ သူမနဲ့ (၁၀) ကီလိုမီတာအကွာလောက်က အပျက်အစီးပုံကြားမှာ ချောင်တစ်ယောက် ပိတ်မိနေတာပါ။ ချောင်နဲ့အတူ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေဟာ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတုန်းပါပဲ။ တစ်ချို့တွေက ကူပါကယ်ပါဆိုပြီး အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ တစ်ချို့တွေက အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာ ရထားကြတယ်။ ဘဏ်မန်နေဂျာ ချောင်ဟာ လူတွေကို စိတ်တည်တည် ငြိမ်ငြိမ်ထားကြဖို့ သူတို့ကို လူတွေလာကယ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး အားပေးနေပါတယ်။
အဆောက်အဦးပြိုကျပြီး နောက်တစ်နာရီအကြာ မြေပေါ်က အဆောက်အဦး အပျက်အစီးကြားကနေ ပထမဆုံး လူတစ်ယောက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူမက ဟော်တယ်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးလွာမှာတည်းတဲ့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် တစ်ယောက်ပါ။ သိပ်မကြာခင်မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသား ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင် နောက်တစ်ယောက် ရှာတွေ့ပြန်တယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာ အဆောက်အဦးထဲက လူစာရင်းကို ကြိုးစားပြုစုနေတယ်။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ လူ(၁၁)ယောက်ကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီး သေဆုံးတဲ့လူ (၁၇)ယောက်ရှိတယ်။ ချောင်နဲ့ ခရစ္စတီးနားတို့ အပါအဝင် ဘဏ်ထဲကလူပေါင်း (၂၀)ကျော် ပိတ်မိနေမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြတယ်။ သူတို့အဖွဲ့က အဆောက်အဦးပျက်ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ ပိတ်မိနေကြတာပါ။
ပြိုကျမူ့အပြီး ၁၂နာရီကျော်ပါပြီ။ ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာ အပျက်အစီးတွေကို ဖယ်ရှားပြီး ဘဏ်နေရာကို ရောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းပါပဲ။ စက်ယန္တရား အကြီးတွေကိုသုံးပြီး ကွန်ကရစ်ပုံတွေကို မသယ်နေကြတာပါ။ အပျက်အစီးပုံတွေဟာ နောက်ထပ်ပြိုကျဖို့ သိပ်လွယ်ပါတယ်။ အပျက်အစီးပုံအောက်ကလူတွေဟာ ကွန်ကရစ်ပြားတွေ တုန်ခါလာပြီး သူတို့အပေါ် ပြိုကျလာနေတာကို ခံစားကြရတယ်။ သူတို့အပေါ်က အပျက်အစီးတွေဟာ ခန့်မှန်းခြေ တန်ခြောက်ထောင်လောက်လေးတယ်။
ချောင်ဟာ အပျက်အစီးပုံကြားမှာ သူ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် တစ်ယောက်ကို တွေ့တယ် ကွန်ကရစ်တိုင်ဟာ သူ့သူငယ်ချင်းပေါ်ပိနေတာပါ။ ချောင်တစ်ယောက် ကွန်ကရစ်တိုင်ကို အားရှိသမျှ တွန်းဖယ်ပေးပေမယ့် မရပါဘူး။ နောက်တစ်ခါကြည့်လိုက်တော့ သူ့သူငယ်ချင်းဟာ သေဆုံးခဲ့ပါပြီ။
နောက်ထပ်ပြိုကျမူ့က လေဝင်ရောက်မူ့ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်။ သူတို့ အောက်စီဂျင်ပြတ်မယ့် အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
ချောင်နဲ့ နောက်ထပ် နှစ်မီတာ အကွာမှာတော့ ခရစ္စတီးနား တစ်ယောက် ကွန်ကရစ်အပြားတွေအောက်မှာ လှူပ်မရပါဘူး။ သူမ မသေချင်သေးဘူးလို့ တွေးနေမိတယ်။
မြေပြင်ပေါ်က ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာ သိပ်ခရီးမတွင်လှဘူး။ ချောင်တို့ဆီရောက်ဖို့ဆို ရက်တော်တော်များများ ကြာဦးမယ်။ အောက်ဆီဂျင်ကလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း နည်းသထက်နည်းလာတယ်။
ဟိုတယ်ပြိုကျတဲ့နေရာနဲ့ မနီးမဝေးမှာ ရထားလမ်းဆောက်လုပ်ဖို့ရောက်နေတဲ့ ဥမင်လှိုင်ခေါင်း ကျွမ်းကျင် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဖွဲ့ဟာ ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေ အလုပ်လုပ် လုပ်ပုံကို လှမ်းအကဲခတ်နေပါတယ်။ သူတို့က တော်မီဂလက်ဂါ၊ သောမတ်စ်မူလာရီ၊ ပက်ထရစ်ဂလက်ဂါ၊ မိုက်ကယ် ပရန်ဒါဂတ်စ်၊ မိုက်ကယ်စကော့ နဲ့ တန်ဂျွန်သွန်းတို့ဖြစ်တယ်။
အဆောက်အဦးပျက်ပေါ်ကို စက်ယန္တရားအကြီးတွေနဲ့ ရှင်းလင်းတာဟာ အောက်မှာပိတ်မိတဲ့သူတွေအပေါ် ထပ်ပြိုကျမှာ သူတို့စိုးရိမ်နေကြတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲဆီကို သူတို့အမြင်ပြောပြပြီး သူတို့ပူးပေါင်းပါဝင်မူ့ကို လက်ခံဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။
သူတို့ရဲ့အကြံက အပေါ်ကနေဖယ်မယ့်အစား အဆောက်အဦးပျက်ရဲ့ အောက်ခြေကနေ ဥမင်လှိူင်ခေါင်းတူးပြီး လူတွေကို ကယ်ထုတ်ဖို့ပါပဲ။ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ တော်တော်ခက်တဲ့အဖြစ်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့အဆိုကို လက်ခံလိုက်တယ်။
တကယ်တော့ အိုင်းရစ်အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေ ဘယ်နားမှာဆိုတာ သေချာမသိပါဘူး။ အမြန်ဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့ ကားရပ်နားခန်းကို လေစုပ်ထုတ်တဲ့ လေပိုက်လမ်းကြောင်းကနေ ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့နဲ့ ပါလာတဲ့ ကယ်ဆယီ်ရေးကင်မရာကနေ အောက်ကအပျက်အစီးကို မြေပြင်ပေါ်ကတန်းမြင်နိုင်တယ်။ သူတို့ဟာ ရေဒူးလောက်မြုပ်နေတဲ့ ကားရပ်နားခန်းထဲက ပျက်စီးနေတဲ့ကားတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ တွန်းဖယ်ပြီး ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ ကားရပ်နားခန်းထဲမှာ ဓါတ်ဆီနံ့တွေက လွင့်ပျံနေတာပါ။
မီးပွားစသေးသေးလေးတစ်ခုကတောင် ပေါက်ကွဲမူ့ကြီးထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သူတို့ရိပ်မိတယ်။ တကယ်တော့ ကားရပ်နားခန်းဟာ တကယ့်အန္တရာယ်နေရာပါ။
သူတို့အဖွဲ့ဟာ အပြင်ကို ခဏပြန်ထွက်ပြီး ကားရပ်နားခန်းက ရေနဲ့ ဓါတ်ဆီတွေကို စုပ်ထုပ်ဖို့ စီစဉ်ကြပြန်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်အသေးစားနဲ့ အပျက်အစီးတွေကို မ ပြီး ဥမင်လှိုူင်ခေါင်း စတူးပါတော့တယ်။ နောက်ထပ် (၇)နာရီကြာအောင် ခက်ခက်ခဲခဲတူးနေတုန်း သူတို့တူးတဲ့ဥမင် ပြိုကျပြန်ပါတယ်။ တော်မီနဲ့သူ့အဖော်ကို အမြန်ဆွဲထုတ် လို့ လက်မတင်လေးလွတ်သွားတယ်။ သူတို့ တူးခဲ့တဲ့ ဥမင်ပိတ်သွားပြန်ပါပြီ။
ချောင်နဲ့ခရစ္စတီးနားတို့ အမှောင်ထဲမှာ ပိတ်မိနေတာ (၃၂)နာရီကြာပါပြီ။ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ သူတို့ဆီကို လာမလားဆိုတာ သူတို့လဲသေချာမသိပါဘူး။
အပြင်ဘက်မှာတော့ ဥမင်လှိူင်ခေါင်းအင်ဂျင်နီယာတွေဟာ နောက်ထပ် ဥမင်လှိုင်ခေါင်း (၃)ခု တူးပြန်ပါပြီ။ သူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာ သူတို့အသက်ကို ပဓါနမထားပဲ ဇွဲရှိရှိလုပ်နေကြတာကို စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေ အံသြမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဥမင်(၂)နဲ့ (၃)ကို အရှေ့တောင်ဘက်ကနေတူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ ကွန်ကရစ်နံရံ တစ်ခုခံနေလို့ ဆက်သွားလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဥမင်အမှက်(၁)ကလဲ အန္တရာယ်ကြီးတုန်းပါပဲ။
ဥမင်(၄)ကို အနောက်မြောက်ဘက်ကနေ တစ်ညလုံးဖောက်ခဲ့ကြတယ်။ တော်မီနဲ့သူ့အဖော် ဟာဥမင်တစ်လျောက် ကားတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
ချောင်နဲ့ခရစ္စတီးနားပိတ်မိနေတာ နှစ်ရက်ကျော်ကြာပါပြီ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ အချိန်ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာ မသိခဲ့ကြပါဘူး။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ဆူဆူညံညံအသံကို ချောင်ကြားလိုက်တယ်။ ချောင်ဟာ ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေ လာနေပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ အနားကသံချောင်းကို ခေါက်ပြိးအချက်ပြလိုက်တယ်။ တော်မီဟာ ချောင်နဲ့ခရစ္စတိးနားတို့နဲ့ အနီးဆုံးနေရာကိုသွားလိုက်တယ်။ သူတို့ကြားထဲမှာ ကွန်ကရစ်တိုင်ကြီးခံနေပြန်တယ်။ ဒီတိုင်ကြီးက အပျက်အစီးတွေကို ထမ်းထားတာပါ။
တန်(၆၀၀၀)ကျော် ကွန်ကရစ်အပျက်အစီးတွေဟာ ခရစ္စတိးနားရဲ့ ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်လောက်မှာရှိတယ်။ အင်ဂျင်နီယာတွေအဖို့ ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။ ဒီကွန်ကရစ်တိုင်ကြီးကို ဖြတ်ထုတ်ရပါတော့မယ်။ တော်မီနဲ့သူ့အဖေါ်ဟာ ကွန်ကရစ်တိုင်ကို ဖြတ်ထုတ်ရာမှာ ထင်တာထက်ပိုလွယ်နေတာကို အံသြတကြီး သိလိုက်ရတယ်။ ချောင်တစ်ယောက် ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကို မြင်ရပါပြီ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ချောင်ဟာ ပြင်ပအလင်းရောက်အောက်မှာ လမ်းလျောက်ပြီး ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ခရစ္စတီးနားပေါ်ပိနေတဲ့ အပိုင်းအစတွေက ပိုများပါတယ်။ သူမကိုတော့ နောက်ထပ် (၇)နာရီကြာမှ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်အပါအဝင် (၆)ယောက်ကို အပျက်အစီးတွေကြားထဲက အသက်ရှင်လျက် ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီ Hotel New World ပြိုကျခဲ့မူ့မှာ စုစုပေါင်း (၁၇)ယောက်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး (၃၃)ယောက် အသက်ဆုံးရုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုဘာကြောင့်ပြိုကျခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို စုံစမ်းဖို့အတွက် Structure Engineer တယ်ရီရှူးကို စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စေခဲ့တယ်။ သူဟာ စင်ကာပူရဲ့ အဓိကကျတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ တည်ဆောက်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါပြီ။ တယ်ရီဟာ ပြိုကျတဲ့နေရာကို သွားရောက်စစ်ဆေးလိုက်တာနဲ့ အံသြသွားရပါတယ်။ အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံး ပြိုကျတယ်ဆိုတာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါ။ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေ အတွက်တော့ သွေးပျက်စရာပါပဲ။ တစ်နိုင်ငံလုံးက အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးတွေမို့ စိုးရိမ်ချင်စရာပါ။ ဒီ Hotel New World ဟာဘာ့ကြောင့် တစ်မိနစ်အတွင်း ပြိုကျရတာပါလဲ။ အဖြေရှာမတွေ့မချင်းတော့ တည်ဆောက်ပုံဆင်တူတဲ့ စင်ကာပူတစ်နိုင်ငံလုံး အန္တရာယ်ရှိနေပြန်ပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သူတွေ ပထမဆုံးစဉ်းစားတာက ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့သလားဆိုတာပါ။ ဒီလိုပေါက်ကွဲမူ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဆောက်အဦးရဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေ မှန်တွေဟာ အဝေးကို လွင့်စင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ အဝေးကိုလွင့်စင်တာမျိုး မီးလောင်ကျွမ်းတာမျိုး မရှိပါဘူး။ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဟာ အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကွန်ကရစ်တွေ သံချောင်းတွေကို စစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်။ ဥမင်လှိုင်ခေါင်း အင်ဂျင်နီယာတွေ ကွန်ကရစ်တိုင်ဖြတ်ခဲ့စဉ်က အင်မတန်လွယ်ကူနေတဲ့အဖြစ်ကို သံသယရှိပြန်တယ်။ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဟာ ကွန်ကရစ် အပိုင်းအစ(၂၄၀)ကို သယ်ဆောင်ပြီး စမ်းသပ်ခန်းမှာ ဘိလပ်မြေပါဝင်နုန်း စစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်။ သူတို့တွေ့ရှိခဲ့တာက ကွန်ကရစ်တိုင်တွေမှာ Micro Cracking လို့ခေါ်တဲ့ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ အက်ကွဲမူ့မျိုးပါ။ ဒီလိုအက်ကွဲမူ့တွေ ဘာလို့ဖြစ်လာပါလဲ။ သူတို့ဟာ အဆောက်အဦးရဲ့ဒီဇိုင်းထဲမှာမပါတဲ့ ဝန်အားအပိုတွေကို ပြန်လေ့လာကြတယ်။
(၁၉၇၅) ခုနှစ်မှာ ဘဏ်အတွက် အသုံးပြုဖို့ (၂၂)တန်လေးတဲ့ အာမခံသေတ္တာကို မြေညီထပ်မှာ ထည့်သွင်းခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ (၁၉၇၈) ခုနှစ်မှာ Chiller အမျိုးအစား အဲကွန်းအကြီးစား နှစ်လုံးကို ခေါင်မိုးပေါ် ထပ်တင်ပြန်တယ်။ (၁၉၈၂) မှာ အဆောက်အဦးမှာ အလှဆင်တဲ့ကြွေပြားတွေ ထပ်ကပ်တာကြောင့် ဝန်ပိုအား တန်(၅၀)ကျော် ထပ်တိုးလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အဆောက်အဦး ပြိုမကျခင်လေးမှာတင် အဲကွန်းနောက်ထပ် တစ်လုံးကို တပ်ဆင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေက နောက်တိုးလာတဲ့ဝန်အားတွေဟာ သက်မှက်ချက်ထက် တော်တော်များနေပြီဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ အဆောက်အဦး ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေဟာ Dead Load လို့ခေါ်တဲ့ အဆောက်အဦးရဲ့ အလေးချိန်နဲ့ Live Load လို့ခေါ်တယ် လူ၊ ပရိဘောဂ၊ အဲကွန်းတို့လို့ နောက်တိုးအလေးချိန်တွေပါ ခံနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ရတယ်။ တွက်ချက်မူ့တွေအရ Dead Load က တန်(၆၀၀၀)ကျော်ရှိပြီး Live Load က တန်(၁၀၀)ကျော်ရှိတယ်။ ဒီစုစုပေါင်းဝန်အားကို ခံနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပါသလား ။
စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သူတွေဟာ တစ်လကျော်ကြာတဲ့အထိ ဘာကြောင့်ပြိုကျခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို သေသေချာချာ ကောက်ချက်မချ နိုင်သေးပါဘူး။ အချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ်နောက်တစ်ခါ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မှ ပုံဆွဲပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ တွက်ချက်မှူ့ ဆိုးဆိုးရွားရွား မှားယွင်းနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကွန်ကရစ်တိုင်အမှက်(၂၆)နဲ့ (၃၂) တို့ဟာ Live Load မပါဘဲ Dead Load ကိုတောင် ခံနိုင်ရည်မရှိအောင် တည်ဆောက်မိခဲ့ကြတယ်။ သူတို့အဖြေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလိုက်ကြပါပြီ။ တိုင်အမှက် (၂၆)၊ (၃၂) နဲ့ (၃၀) တို့ဟာ တွက်ချက်မူ့မှားယွင်းမူ့ ကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၁၅)နှစ်တိုင်တိုင် လူမသိအောင် အက်ကွဲနေခဲ့တာပါ။ Live Load တွေမပါရင်တောင်မှ ဟိုတယ်ဟာ ပြိုကျမှာပါပဲ။
စင်ကာပူအစိုးရက ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ၊နဲ့ ဥမင်လှိုင်ခေါင်း အင်ဂျင်နီယာတွေကို ဂုဏ်ပြုညစာနဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံပါတယ်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် သောမတ်စ် မူလာရီကို O.B.E ဆုချီးမြှင့်ဖို့ စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ပေမယ့် သူ့အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးမပါဘဲ သူ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ပေးလို့ လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေနောက်ပိုင်းမှာ တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းကို သေသေချာချာ ပြန်စစ်ကြပြီး ဒီဇိုင်းမမှန်တဲ့ ဟွာချောင်းဂျူနီယာကောလိပ် လိုမျိုး အဆောက်အဦးတွေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
(31 July 14)
Posted by ဦးလင္း at 04:06 No comments:
သူမပျောက်ဆုံးခဲ့တာ အခုဆို (၇)နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ သူမကို သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ အခုချိန်ထိ လွတ်မြောက်နေဆဲပါ။ သူက မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသူ အယ်လ်တန်တူရာ ရှရီဘူး (Altantuya Shariibuu)။ သူမကို ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ အယ်လ်တန်တူရာ ငယ်စဉ်ဘဝက သူမဖခင် တာဝန်ကျရာ ရုရှားနိုင်ငံ စိန့်ပီတာစဘတ် တွင် ကြီးပြင်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ပီကင်းမှာ Economic Management ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားခဲ့တယ်။ ရုရှား၊ တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ကိုရီးယား၊ မွန်ဂို နဲ့ ပြင်သစ်ဘာသာစကား တို့ကိုကျွမ်းကျင်စွာ ပြောနိုင်တယ်။
အယ်လ်တန်တူရာတို့ မိသားစုဟာ (၁၉၉၀)လောက်မှာ မွန်ဂိုလီးယား နိုင်ငံကို ပြန်လည်ပြောင်းရွေ့ ခဲ့ကြတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာ သူမ(၁၈)နှစ်အရွယ်မှာ မွန်ဂိုက techno အဆိုတော် မာဒိုင်းဆိုသူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတစ်ယောက်ရအပြီးမှာ သူတို့အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲသွားတယ်။
ကလေးကို မိဘအိမ်ထားပြီး ပြင်သစ်မှာ မော်ဒယ်သင်တန်း သွားတက်လိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မော်ဒယ်အဖြစ်နဲ့ တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ (၂၀၀၂) လောက်မှာ နောက်တစ်ခါ အိမ်ထောင်ကျတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း နောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက်ရအပြီး အိမ်ထောင်ကွဲပြန်တယ်။
သူမဟာ နောက်ပိုင်းမှာ စကားပြန် အလုပ်လုပ်ပြီး တရုတ်၊ စင်ကာပူနဲ့ မလေးရှားတို့လို နိုင်ငံတွေကို မကြာခဏ သွားရလေ့ရှိတယ်။ ဒီလိုခရီးတွေသွားရင်း အဲ့ဒီအချိန်က မလေးရှားနိင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချူပ် (ယခုဝန်ကြီးချူပ်) နာဂျစ်တန် ရာဇတ် (Najib Tun Razak) နဲ့ နီးစပ်သူ၊ နိုင်ငံရေးရာသုတေသီ အဗ္ဗဒူ ရာဇတ် ဘဂင်ဒါ (Abdul Razak Baginda) နဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တယ်။ ခန့်မှန်းပြောဆိုမှူ့တွေအရ သူမနဲ့ အဗ္ဗဒူ ရာဇတ် တို့နှစ်ယောက်ကို မိတ်ဆက်ပေးတာ နာဂျစ်ရာဇတ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီလိုတွေ့ဆုံမူ့ကနေပဲ သူမဘဝအကို အဆုံးသတ်စေဖို့ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ သူတို့နှစ်ယောက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ငြိတွယ်သွားပြီး (၂၀၀၅)ခုနှစ် အဗ္ဗဒူ ရာဇတ်ရဲ့ ပဲရစ်ခရီးစဉ်မှာ လိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာ အကောင်းစား စားသောက်ဆိုင်တွေမှာစား၊ ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်တွေမှာ တည်းကြပေမယ့် အပျော်ခရီးတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
(၂၀၀၂)ခုနှစ် နာဂျစ်တန်ရာဇတ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘဝက ပြင်သစ်နဲ့စပိန် ကုမ္မဏီ Armaris ဆီကနေ ယူရို တစ်ဘီလီလျံနဲ့ Scorpene ရေငုပ်သင်္ဘော (၃)စီး ဝယ်ယူခဲ့တယ်။ ပွဲစားခအနေနဲ့ ယူရိုဒေါ်လာ (၁၁၄) သန်းကို အဗ္ဗဒူ ရာဇတ်ပိုင်တဲ့ Perimekar ကုမ္မဏီကို ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုကော်မရှင်ခပေးတာဟာ ပြင်သစ်မှာတော့ တရားမဝင်ပါဘူး။ မလေးရှားအစိုးရ အနေနဲ့တော့ ဒါတွေအားလုံးကိုသိတယ်။
ဒီလိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတဲ့နေရာမှာ အယ်လ်တန်တူရာဟာ စကားပြန်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပါသွားတယ်လို့ ယူဆရတယ်။ (၂၀၁၆) အောက်တိုဘာလ အစောပိုင်းမှာ ကော်မရှင်ခကို အဗ္ဗဒူ ရာဇတ်ပိုင်တဲ့ Perimekar ကုမ ္မဏီ ဘဏ်အကောင့်ထဲ ပို့ပြီးကြောင်း Armaris ကုမ္မဏီက အကြောင်းကြားလာတယ်။ သူမဟာ မလေးရှားနိုင်ငံကို လိုက်သွားပြီး ကော်မရှင်ခထဲက သူမအတွက် ရပိုင်ခွင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးသိန်း တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်မတိုင်မီ အယ်လ်တန်တူရာ နဲ့ အဗ္ဗဒူရာဇတ် တို့ဇတ်လမ်းက ပြတ်စဲပြီးသားပါ။
အောက်တိုလာလ (၁ဂ) ရက် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ညနေခင်းမှာ သူမဟာ အဗ္ဗဒူရာဇတ် တို့အိမ်လိုက်သွားပြီး အကြီးအကျယ် အငြင်းပွားခဲ့တယ်။ အဗ္ဗဒူရာဇတ် ဟာ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဒါရိုက်တာဆီ ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်တယ်။ ညကိုးနာရီလောက်မှာ နာဂျစ်ရာဇတ်ရဲ့ သက်တော်စောင့် အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ၊ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိနှစ်ဦးဖြစ်သူ ဆီရူးအိုမာ နဲ့ အဇီလာတို့ကို သူတို့နှစ်ယောက် ရောက်လာပြီး အယ်လ်တန်တူရာကို ဖမ်းခေါ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး အယ်လ်တန်တူရာကို ဘယ်သူမှ နောက်ထပ်မတွေ့ကြရတော့ပါဘူး။ သူမရဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံထဲ ဝင်ရောက်တဲ့ မှက်တမ်းကိုလဲ ဖျောက်ဖျက်ပြစ်လိုက်တယ်။
ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေ မတိုင်မီမှာ တူရာဟာ ရဲစခန်းကိုသွားပြီး အမူ့ဖွင့်ခဲ့တယ်။ တကယ်လို့သာ သူပျောက်သွားခဲ့ရင် တရားခံဟာ အဗ္ဗဒူရာဇတ် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်အသိပေးခဲ့တယ်။
သူမနဲ့အဖော်အဖြစ်လိုက်လာသူ ညီမနဲ့ ညီမဝမ်းကွဲတို့ဟာ သူမပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း သိသိခြင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မွန်ဂိုလီးယား သံရုံး (မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သံရုံးမရှိသောကြောင့်) ကို အကြောင်းကြားပြီး ၂၀၀၆ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၁၉)မှာ အမူဖွင့်ခဲ့တယ်။ ရဲတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အယ်လ်တန်တူရာကို မတွေ့တော့ပဲ သူမရဲ့ အရိုးလို့ယူဆလို့ရတဲ့ အရာတွေကိုသာ တွေ့ခဲ့တယ်။ DNA စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အယ်လ်တန်တူရာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ သူမဟာ သေနတ်နဲ့ နှစ်ချက် ပြစ်ခံရပြီးမှ သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို C4 ယမ်းပျော့နဲ့ ဖောက်ခွဲခံခဲ့ရတာပါ။
ဒီအမူ့နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး အဗ္ဗဒူရာဇတ်၊ ဆီရူးအိုမာ နဲ့ အဇီလာတို့ကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီး လူသတ်မူ့နဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်။ လူသိပ်မသိတဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာ တော့ ဆီရူးအိုမာရဲ့ ဖြောင့်ချက်ကို အခုလို တွေ့ရတယ်။
“ ဒီတရုတ်မ (အယ်လ်တန်တူရာ)က ကျနော်ခါးကြားက သေနတ်ကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ သူ့မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်း၊ အသက်ကိုချမ်းသာပေးဖို့ တောင်းပန်တယ်ဗျ။ အဇီလာက သူ့ကို ဆွဲပြီး ကိုင်ပေါက်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျနော်က ခေါင်းကို တစ်ချက်ပစ်လိုက်တယ်။ အဇီလာက သူမရဲ့ အဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီး အလောင်းကို ပလပ်စတစ်အိပ် အနက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ သူမလက်က လှူပ်နေတုန်းပဲ။ ဒါနဲ့ ကျနော်လဲ ဦးခေါင်းကို နောက်ထပ်တစ်ချက် ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ နှစ်ယောက်သား တောထဲကို မသွားပြီး သူမရဲ့ ခေါင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ ခြေထောက်မှာ ယမ်းပျော့တွေကပ်ပြီး ဖောက်ခွဲလိုက်တာပဲ”။
အပြန်အလှန် လျောက်လှဲချက်တွေ အပြီး အောက်တိုဘာ (၂၀၀ဂ)မှာ တရားရုံးတော်က ထင်ရှားတဲ့သက်သေ မရှိဘူးဆိုပြီး အဗ္ဗဒူရာဇတ်ကို အမူ့မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ အဗ္ဗဒူရာဇတ် တစ်ယောက် နာဂျစ်ရဲ့ အတွင်းစည်းအဖြစ် ရှိမနေတော့ပဲ အင်္ဂလန်မှာ သွားရောက်အခြေချ နေထိုင်လျှက်ရှိတယ်။ (၂၀၀၉) ဧပြီလမှာ ဆီရုးက သူ့ကိုသေဒဏ်မချမှက်ဖို့၊ သူတို့ဟာ တရားရုံးတော်ကို မလာနိုင်တဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် အကာအကွယ်ပြုနေတဲ့ သိုးမည်းတွေဖြစ်ကြောင်း မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ လျောက်ထားခဲ့တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ တရားသူကြီးက ဆီရူးအိုမာနဲ့ အဇီလာ တို့ ရဲအရာရှိနှစ်ယောက်ကို ၂၀၁၃ သြဂုတ်လမှာ မသေမချင်း ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး သတ်စေဖို့ သေဒဏ်ချမှက်ခဲ့ တယ်။
ဒီလိုအမိန့်ချမှက်ချိန်မှာ တရားခံနှစ်ယောက်မျက်နှာမှာ ဘယ်လိုခံစားချက်မျိူးကိုမှ မတွေ့မြင်ကြရခဲ့ပါဘူး။ သူတို့မိသားစုဝင်တွေကလဲ တရားရုံးတော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ခံခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရှေ့နေတွေကတော့ အသနားခံစာတင်ဖို့ ဆက်ကြိုးစား ခဲ့တယ်။
၂၀၁၃ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာတော့ မလေးရှား တရားရုံးတော်က အကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ ဆီရူးအိုမာနဲ့ အဇီလာကို တရားသေလွတ်လိုက်ပြန်တယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံသားများနဲ့ အယ်လ်တန်တူရာ့ဖခင် တို့က မလေးရှား တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို အကြီးအကျယ် ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်။ တစ်ကယ်တော့ နောက်ကွယ်က ခိုင်းစေသူကို မဖေါ်ထုတ်ဘဲ ဒီရဲအရာရှိနှစ်ယောက်တည်းကို အပြစ်ပုံချပြီး သေဒဏ်ပေးတာဟာ တရားမျှတမူ့မရှိပါဘူး။ ဥပဒေအရတော့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ထားတဲ့ ဒီနှစ်ယောက်ကို လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးတာကြတော့လည်း လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါ။
ကျနော့အထင်တော့ သူတို့သုံးယောက်စလုံး မသတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အယ်လ်တန်တူရာတစ်ယောက် စိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့ သူ့ခေါင်းသူ သေနတ်နဲ့ နှစ်ချက်ပစ်၊ သေအံ့မူးမူး အချိန်မှာ သူ့ကိုယ်သူ C4 နဲ့ ဖောက်ခွဲပြစ်လိုက်တာ နေမှာပါ ----နော့-----
Posted by ဦးလင္း at 06:16 No comments:
နူကလီးယားစွမ်းအားဟာ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ အတွက်တော့ သုံးလို့မကုန်တဲ့ စွမ်းအင်တွေပါပဲ။ အဲ့ဒီအချိန် (၁၉၈၆) တုန်းက နူကလီးယား ဓါတ်အားပေ...
သူမပျောက်ဆုံးခဲ့တာ အခုဆို (၇)နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ သူမကို သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ အခုချိန်ထိ လွတ်မြောက်နေဆဲပါ။ သူက မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသ...
ကမ္ဘာကြီးမှာ အရှုပ်ထွေးဆုံး သတ္တဝါတွေက ခပ်ကြီးကြီးဦးနှောက်၊ ခြေ၂ ချောင်းပေါ်လမ်းလျောက်ပြီး နို့တိုက်သတ္တဝါတွေ ဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ လ...
SilkAir လေယဉ် ပျက်ကျခဲ့စဉ်က
လေယာဉ်တွေကို ပျက်မကျအောင် ဒီဇိုင်းထုတ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ယနေ့အချိန်ထိ ပျက်ကျနေတုန်းပါပဲ။ ဒီလိုပျက်ကျတဲ့အခါမှာ ပညာရှင်တ...
စင်ကာပူ- နယူးရောက်မြို့တော် အကျယ်အဝန်းလောက်ရှိတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာ လူဦးရေ လေးသန်းကျော် နေထိုင်ပါတယ်။ ဒီအင်္ဂလိပ် စကားပြော နိုင်ငံင...